ED Recovery Stories6- သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ED Recovery Stories6သည်အကောင့်တိုတောင်းသောစာမျက်နှာ ၈ မျက်နှာပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
PIED reboot သို့ 1 တစ်လ!
မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေ၊ ငါ့နာမည် Travis ပါ လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အိပ်ရာပေါ်၌စိုက်ထူခြင်းကိုမခံရပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အလွန်မြန်ဆန်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များအကြောင်းလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သော်လည်းလှုံ့ဆော်သူ (များသောအားဖြင့် YouTube) ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်ချက်ချင်းစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝ၏နောက် ၅ နှစ်တာအတွက်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ခန့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ “ အစွန်းရောက်” ဟုသတ်မှတ်ခံရမည့်မည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမျှကျွန်ုပ်လုံးဝမကြည့်ခဲ့ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည် Instagram ဓာတ်ပုံများနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အပါအ ၀ င်မည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်နှင့် MO'ing ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အခုတစ်လလောက်ကြာပြီ။ ကျွန်တော့်အပြားကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစလုပ်ပြီးတစ်ပတ်လောက်မှာရောက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ“ Flatline ရဲ့အဆုံးမှာအလင်းရောင်” ကိုစပြီးတွေ့ပြီလို့ထင်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ဒစ်ကပြားလေး၏ပထမစုံတွဲရက်သတ္တပတ် ၂၄/၇ မှာပျော့ပျောင်းလွင့်သွားသည်။ ငါမနက်အိပ်ရာထချိန်မှလွဲလျှင် (ငါမှတ်မိနိုင်သမျှနံနက်သစ်သားရှိခဲ့ပြီ) ။
သို့သော်မကြာသေးမီကငါလိင်စိတ်အနည်းငယ်တိုးသတိပြုမိခဲ့ကြပြီ။ ငါတော်တော်လေးချိုလွန်းလို့ခံစားရပြီးကျွန်တော့်ငပဲကိုတို့ထိရုံသာစိုက်ထူနိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံသဏ္goodာန်ကောင်းမွန်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၄ လတာကာလအတွင်းအားကစားရုံသို့ပုံမှန်သွားခဲ့သည်။ ငါစာသားတစ်ချိန်ကမီချီဂန်ပြည်နယ်မှာကောလိပ်တက်ခဲ့တယ်။ ငါအဲဒီမှာရှိနေတုန်းငါ့ရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ မိန်းကလေးတွေကငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါနင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးရှုပ်ထွေးနေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ကြောက်တယ်။ အကြံဥာဏ်များလား။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်အိပ်ရာဝင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်စိတ်ထိခိုက်မည်လော။ ငါကတစ်လလောက်ပဲပြန်နေလို့အနည်းဆုံး ၁-၂ လလောက်လိုချင်လိမ့်မယ်။
PIED ခံစားနေရပြီး 25m
NoFap စံ mode ကိုလုပ်နေတာအကြောင်းကို 24 ရက်အကြာမှာယနေ့ညကြောက်မက်ဘွယ်လိင် (သို့သော်အမြန်အရမ်းရယ်ရတယ်) ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရှည်လျားသောအချိန်များအတွက်ကောင်းသော E ကိုတက်ထားရန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ .. ယနေ့ညငါပြ,နာမရှိ, ခိုင်မာတဲ့ခံစားရတယ်ငါသည်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ E မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိကောင်းသော E မဖြုန်းပါနှင့်၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူအတွက်ထို shit ကိုသိမ်းဆည်းပါ။
တစ်နေ့တာမှာအောင်မြင်မှု 47 ရက်ပေါင်း
ငါသောကြာနေ့ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူဒီအတိတ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်း orgasm နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသူသည်ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့ပြုနိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ porn အလေ့အထကနေသုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးခဲ့ပြီးပြီများနှင့်သောကြာနေ့၏အဖြစ်, ငါအိပ်ခန်းထဲမှာအောင်မြင်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါသည်ထိုနေ့အလွန်အမင်းနိမ့်ခံစားပင်လိင်စဉ်အတွင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အတူတကွသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ဆောင်နေတက်အဆုံးသတ်အခြိနျကာလအတှငျးအကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်စိတ်အကြောင်းကိုငါ့ဇနီးမှပြောဆိုသော။ တစ်ဦးနားလည်မှုဖက်ထားရှိခြင်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းက ED ကိုသေစေသည့်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်
ငါ၏ 'ခဲယဉ်းသောသက်သေအထောက်အထား' သည်ငါ့ခြေထောက်ကြားတွင်မှန်ကန်နေသည်။
ယောက်ျားများ the ကောင်းသောအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ
2 ရက်သတ္တပတ်ငါ၏အ ED ဖယ်ရှားပစ်ရပုံအလုံအလောက်ခဲ့သည်
သိသာထင်ရှားတဲ့ ED ဆက်ဆံဖို့အခမဲ့ညစ်ညမ်းသွားလူတိုင်းအဘို့ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုအများရှိသော်လည်း,2ရက်သတ္တပတ်ငါ့အဘို့ပဒေသာခဲ့လိမ့်မယ်။
ငါ၏အသစ်ကိုမိတ်ဖက်တွေနဲ့ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကြီးရှိသမျှတို့ကိုငါမှာခက်ခဲမရနိုင်ဘူး။ ခက်သည် non-ရပ်တန့်တပြင်လုံးကိုအချိန်: မနေ့ကဝင်ရိုးစွန်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူမငါ့ကိုနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကတခြား floppy donger တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ XD ကိုတက်နေလို့ပါ။
ဟေ့ယောက်ျားတွေ,3လအတွင်း
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အလိုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၅၀၊ ၆၀ ၌သင်ခံစားရသကဲ့သို့သင်ခံစားခဲ့ရသည့်အတိုင်းခံစားခဲ့ရသည်။ အချည်းနှီးသောခံစားမှုလည်းရှိသည်။ သင်က“ ကောင်းပြီ၊ ငါဒီလောက်ဝေးဝေးရောက်နေပြီ။ နောက်တစ်ခုကဘာလဲ?"
ငါ့အဘို့ကပိုပြီးအပြောင်းအလဲများကိုသတိထားမိဖို့နီးကပ် 12 ရက်သတ္တပတ်ယူ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်သော်လည်းအခြားအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အကြောင်းကိုသင့်အားအချို့သောအကြံဥာဏ်များပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်ရှာခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မထားပါနဲ့, အစားဖော်ရွေအပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားရုံ။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံလောက်စွာဖော်ထုတ်နိုင်ပါကသင့်အားအချက်ပြမည့်မိန်းမများစွာရှိသင့်သည်။ 2D- လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်သင်ဤနိမိတ်လက္ခဏာများကိုယခုဖတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ငါရက်ပေါင်းလေးဆယ် PIED ခဲ့သည်။ ငါဆယ်ခြောက်နှစ်လုံးလုံးပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့ပြီးမဂ္ဂဇင်းများမတိုင်ခင်ကကျွန်ုပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့ပြန်သွားသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူစိုက်ထူမရနိုင်ပါ၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ငါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအရက်ကအဓိကအခန်းကဏ္playedကပါ ၀ င်တယ်။ ငါအနီရောင်ဝိုင်တစ်ပုလင်းတစ်ဝက်ကိုမနုတ်တော့ဘဲအသက် ၅၁ နှစ်မှာစိုက်ထူဖို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုတာငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ မှတ်ချက်ပေးရန် Link ကို။
ဒါဟာငါ့အ dudes ပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့
ဒါကြောင့်မနေ့ကငါကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီမိန်းမနဲ့အိပ်ခဲ့ရတယ်။ ED ကြောင့်ငါအရမ်းဂုဏ်ယူတယ်၊ ငါအရမ်းကောင်းသွားတယ်၊ ငါ့ယောက်ျားတွေကိုပိုယုံလာရင်ငါ့ကိုယုံပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုကိုစတင်အကြံပြုနိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်ပြေး။ တစ်ပတ်လျှင် ၄ ရက်ကဲ့သို့အလေးချိန်များကိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုကိုမတွေ့ရသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အားတင်းထားသည်
၄၅ ရက် - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ ED သည်အနာပျောက်သည်။
ငါအရှည် 0.4 (ငါ၏အထူနဲ့အပါးဆုံးရမှတ်မှာ) လုံးပတ်အတွက်လက်မနှင့် 0.1 လက်မရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါနည်းနည်းဆွနှင့်အတူခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ငါ့လိင်စိတ်ငါ finasteroid ကိုသုံးပါသော်လည်းတိုးတက်မြင့်မားလာနေပါတယ်။ (ယနေ့ကဖြတ်) ယောက်ျားတွေမယ့်အပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်! ကျနော်တို့ကိုတဖန် FAP ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
သန့်ရှင်းသောဘုရား Shit, ဒီအလုပ်လုပ်။
ရုံရက်အနည်းငယ်အကြာ, ငါအ posted / r / လိင် ပျော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများတွေ့ကြုံနှင့်စပ်လျဉ်း။ ငါ post ကိုထွက်ရိုက်နှိပ်တဲ့အခါ, ငါနင်္ဂနွေနေ့ကတည်းကအခမဲ့ PMO ရှိ၏ ဒီရွေးချယ်မှုများကမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါရိုးရှင်းစွာအလုပ်ကဖြစ်ပျက်စေရန်နဲ့အခြားအရာနှင့်လည်းအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့သညျ။
ငါသောကြာနေ့အထိအလုပ်အတွက်ပြည်နယ်မှထွက်သွား၏။ အဲဒါကကျွန်တော် PMO ကိုအခမဲ့ ၅ ရက်လောက်ချန်ထားခဲ့ပြီးကျွန်တော် Texas ကိုမပြန်ခင်။ ငါ့ညနေခင်းလေးမှာငါအိပ်မက်မက်နေခဲ့တယ်။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးသိပ်မကြာခင်မှာသူမအိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်။ နောက်ပြန်ကားမောင်းသွားသောအခါ ၅ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်မ ၀ င်နိုင်ကြောင်းသူမအားပြောပြခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်သူမသည်သူမဖြစ်ခဲ့တာထက် ပို၍ သိသာထင်ရှားလိမ့်မည်။ သူမသည်ထိုအကြံဥာဏ်ကိုနှစ်သက်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီရန်မစောင့်နိုင်ခဲ့ပါ။
လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများတွင် ၁၀၀% ပြည့်ဝသောစိုက်ထူမှုရရှိရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌မကြာခဏပြissuesနာများရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အဲ့ဒီညမှာပဲကျွန်မအဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေဟာလတွေအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ ထိုညနေတွင်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ကာယဆိုင်ရာထိတွေ့မှုမျိုးကိုမဆိုရရှိခဲ့သည့်ဒုတိယအချက်မှာအလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါဟာလုံးဝမလျော့ခဲ့ပါဘူး Fellatio နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ကောင်းသောခံစားရတယ်။ ဒါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးတခုမဟုတ်ပါ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မအသေးစိတ်မရှင်းပြရသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီညမှာအနည်းဆုံးတစ်နာရီသူမအပေါ်သူမအပြည့်အ ၀ သွားခဲ့တယ်။ သူမကြိုက်သည် တစ်နာရီအကြာ, ငါနေဆဲအိပ်ရာဝင်ချိန် 100 ပတ်ပတ်လည်အဘို့အကြှနျုပျကိုအတွက်စွမ်းအင်ရှိခဲ့တယ်။
ဒီအစည်းအဝေးတွေမတိုင်ခင်တစ်နာရီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုကြာမယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမလိုချင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအရာများဖြစ်ရုံသာမက PiV တွင်စားသုံးခြင်းကိုပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာလုံးဝမဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်သည်ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဤအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအချိန်မရွေးပေါက်ကွဲနိုင်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအေးဆေးတည်ငြိမ်ခဲ့တယ်။ Kegel တွေတကယ်အလုပ်လုပ်တာကိုငါ ၀ မ်းသာတယ်။ 😛
ငါသည်လည်းဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်ဦးတည်းပါးစပ်ကနေ orgasm နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီလိုတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွက်! My Gal အလုပ်ချွတ်ခေါင်းနှစ်လုံးရှေ့တော်၌ထိုယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ညနပေိုငျးပြီးနောက်နံနက်ကျွန်မအမြန်နံနက် blowjob မှကုသခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်3မိနစ်ထက်လျော့နည်းခဲ့ကြရတယ်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုချွတ်တယ် (ငါနေဆဲပုံးသို့ရောက်လာသော!) ဒါကကြောင်းလျင်မြန်စွာအဆုံးဆီသို့ငါ၏အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲဖြစ်ပျက်များနှင့်အထူးသဖြင့်မရတော့မှသိရသည်။
မြင်ပြီးနောက် / r / NoFap အခြားနေရာများတွင်ဖော်ပြပြီးအမြန်စာဖတ်ခြင်းသည်ဤမမျှော်လင့်သောလိင်အမြင့်ဆုံးသည် PMO ကိုရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ငါဒီရိုက်ချက်ကိုပေးပြီးငါဘာတွေအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာကြည့်မယ်။
ဝိုး - ဘီကီနီမိန်းကလေးများကိုထိုင်ကာစဉ်းစားခြင်းမှယနေ့ခေတ်တွင်အကြီးအကျယ်စိုက်ထူနိုင်ခြင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မဖြစ်ခဲ့ပါ။
သောကြာနေ့ 4th အောက်တိုဘာ။ ငါ ED နှင့် PIED ပျောက်ကင်းစေသည့်နေ့က
ပြီးခဲ့သည့်ညက 79 နေ့ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းသုတ်ရည်ထုတ်လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့ ငါအရမ်းအရမ်းပျော်တယ်
ဒါကတကယ်အလုပ်လုပ်တယ် ငါသံသယများစွာရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်တာ၊ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့ရည်းစားအတွင်း၌လက်စသတ်။ ကမ္ဘာ၏ထိပ်တွင် !!!!
noFap ဖြင့် PIED ကိုကုသပေးသောမည်သူမဆို?
ငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ အကြောင်းကို 14 ရက်ကြာပါတယ်။ သို့တိုင်သွားရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိပေမယ့်မဆိုအကူအညီမပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ငါ့အဘို့က porn ဖြစ်ဟန်ရှိသော်လည်းငါသည်ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်မှာငါ့အလိုရှိသမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် directing လည်းကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သေချာဖြစ်၏။ သင့်ရဲ့မိုင်အကွာအဝေးကွဲပြားစေခြင်းငှါထိုသို့အချက်များအများကြီးပေါ် မူတည်. ကြာကြာယူနိုင်ဘူး။ ကမှာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, အဲဒါကိုကျိုးနပ်သည်။
ငါ porn အတွက်ဘယ်လောက်ကြာကြာရှောင်ခဲ့ရသလဲမသိဘူး၊ အနည်းဆုံး ၄ ပတ်နှင့်ယခု ၅ ဖြစ်မည်။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တော့မည့်နေ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ယနေ့ညနေခင်း ၂ နာရီနှင့်ဘာမှမဖြစ်။ ငါ့ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကနံနက်ခင်းသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတဖန်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးတစ်နေ့တာအတွင်းကြိုကြားကြိုကြားကြိုကြားစိုက်ထူခြင်းနှင့် ပို၍ ချိုသာသော ကျွန်တော်အသက်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 10 ရက်အကြာမှာလိင်ခဲ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းပျော်တယ် ကျွန်တော့်အသက် ၂၀ ကျော်ပြီ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံးအတွက်နေ့စဉ်ကျွန်တော် fap လုပ်လိမ့်မည်။ တကယ်တော့ငါဟာအမျိုးသမီး ၄ ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ ငါ (PIED) ကိုထိုးဖောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲယဉ်းလို့မရတဲ့အတွက်အချိန်တိုင်းအဲဒါကိုထွင်ခဲ့တယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အဖြစ်အပျက်တိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်။ ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်ကောင်း nofap ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်အလေးအနက်ထားဘူး။ ၁၀ ရက်သာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။ ငါအရမ်းရန်လိုခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုခံစားရတယ်။ အမျိုးသမီးများကကျွန်ုပ်ကိုကွဲပြားစွာကြည့်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိပြီးတစ်ခုမှာအခြားနေ့ကကျွန်ုပ်၏နံပါတ်ကိုပင်တောင်းခဲ့သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်။ ငါမိန်းကလေးတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ဖူးပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်လာဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ပိုပြီးခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့ဘူး။ ငါသူမကိုအိမ်သို့ပြန်ပို့လိုက်သည်၊ ဤသည်မှာတတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ငါသူမနဲ့အိပ်ချင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအလုံအလောက်ခက်ခဲနေနိုင်တယ်လို့ခံစားရချိန်အထိစောင့်ခဲ့တယ်။ ငါသူမကိုဤအရာကိုမပြောခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားသောအခါပြောင်းရွှေ့ရန်စောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။
၁၀ ရက်ကြာပြီးနောက်ငါဟာတကယ်ကိုချိုချိုသာသာနဲ့ခံစားခဲ့ရပြီးတကယ်တော့ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ၉၀% လောက်အခက်ခဲဆုံးပဲ။ သေချာဘို့လုံလောက်ပါတယ်။ တစ်ခုကနောက်တစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားပြီးနောက်ငါသိလိုက်ရတာကဒီလှပတဲ့မိန်းကလေးကိုငါတကယ်နမ်းနေတယ်၊ ​​သူမရူးသွားပြီ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နေ့လည်ခင်းနှင့်ညလုံး fucked ။ နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုမယုံနိုင်ဘူးဒါပေမယ့်လူသစ်တစ်ယောက်လိုငါခံစားရတယ်။ သူမသည်မကြာမီပြန်လာမယ့်ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုအပြည့်အဝကုသရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိသေးသည်။ သို့သော်ရလဒ်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်မြန်ဆန်ပါသည်။ အမှန်ပဲပျော်ရွှင်။
ငါအပျိုစင်ဘဝကိုတကယ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလား။ ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးရေတွက်မယ်မသေချာဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာသိပ်တိုတောင်းတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ထိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်။
အစစ်အမှန်မိန်းကလေးများနှင့်အတူ ED - ပိုကောင်းရသနည်း
ငါ "internal_idiot" နှင့်အတူသဘောတူသည်။ သင်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ သင်စိတ်ရှည်ဖို့လိုပြီးသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုကိုအရမ်းအလေးအနက်ထားရမယ်။ ဂယ်ရီ Wilson ကဤအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးခဲ့သည် သူကအငယ်ဆုံးယောက်ျားအချို့သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ၉ လအထိလိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါကိုယ်တိုင် ၇ လလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်“ rebooting” လုပ်ဖို့အချိန်တော်တော်များများလိုလိမ့်မယ်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံလိင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀၇ ကကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်လုံးဝ ED ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုက်ကွန်တွင်အကောင်းဆုံးဘွတ်ဖိနပ်များကိုရှာဖွေရန်နေ့စဉ် ၃ နာရီအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများကိုနေ့က 180 ပြီးနောက်စတင်ခဲ့တယ်။ ဘဝမှာခြားနားချက်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ပါသည်:
ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီ။ ယခုငါ porn ကိုရှာဖွေရန်နာရီတိုင်းအလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ကြဘူး။ ငါလိင်အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအပေါက်တစ်ရက်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့မြည်းရုတ်တရက်မြင်လိုက်တော့ချက်ချင်းပဲသူရူးသွားတယ်။ ထိုအခါငါကိုယ့်ကိုယ်ကို - ငါ့နှုတ်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မျက်စိကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်သူမအပေါ်အရူးကဲ့သို့ကြည့်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါလိင်အကြောင်းသိပ်မစဉ်းစားဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါရုတ်တရက်လုပ်မိတဲ့အခါဒါကမိန်းမစစ်စစ်တစ် ဦး ကိုတွေ့တော့ခံစားချက်တွေရုတ်တရက်ပြင်းထန်လာတယ်။ ဒီဘဝသစ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်
ဒါကငါ့အဘို့ Nofap ရဲ့အစမှာရေးသားခဲ့ရာဖြစ်ပါသည်:
“ အသက် ၂၀ ရောက်တော့ Viagra နဲ့အခြား ED-Meds တွေကိုပေးတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆီကျွန်မသွားခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်ဆရာဝန်တစ် ဦး ကကျွန်ုပ်သည် (dopamine-antagonist apomorphine အပေါ်အခြေခံပြီး) အမှုန့်များ Viagra နှင့် ixense ကိုအနည်းဆုံးထုထည်အထိဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်အခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် cavernous body auto-injective ကုထုံးသည်သွေးတွင်းသွေးယိုစိမ့်ခြင်း။ ဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုလိင်တံကာကွယ်ခြင်းအကြောင်းပြောပြသည်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာပြပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟာအလွန်ဆိုးရွားလှတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားခဲ့ရပြီး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးခြင်းမရှိတော့ဘူး၊ ဒီနေ့ငါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းဟာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲလို့ငါထင်တယ်။ ”
နေ့ ၂၄ ရက်မှစ၍ နံနက်ခင်းသစ်သားဖြင့် ၃ ရက်တာနိုးခဲ့ရသည်။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာဒီတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ပါဘူး! Holy Shit … Nofap အလုပ်လုပ်နေတယ်။
မနေ့ကငါရည်းစားကိုလျက်နေတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာငါဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုဘဲရောက်လာခဲ့တယ်။ ငါဟာ ၁၃ နှစ်အရွယ်၊
ဒီအချက်ကိုမင်းနဲ့မျှဝေချင်တယ် လူတိုင်းကိုအားအင်ပါပါ၊ PMO ကိုမင်းရဲ့ဘဝကိုမဖျက်ဆီးပါစေနဲ့။ နောက်တဖန် fap ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်! http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1hhlfm/nofap_is_curing_my_ed/
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုငါ့လိင်တံထိမိခြင်းနှင့်ကိုယ့်က hard ရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲ !!!!!!!!!!! OH အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျရဲ့ IM ပျော်ရွှင် !!!! အိုင်တီ 95% ရှိဖို့ကွိုးစားကဲ့သို့ဖြစ်၏နှင့်အိုင်တီသေသောသူအတွက်ဤမျှကာလပတ်လုံးထားတဲ့ IM ပျော်ရွှင်လုလင်ပျိုလုလင်ပျိုလုလင်ပျိုလုလင်ပျိုလုလင်ပျို fucking ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်အရာတစ်ခုခုပြောနေ !!!!!!!
အင်း .. ဒါကနောက် ၅% လောက်သွားချင်နေတယ်ဒါပေမယ့်ငရဲက ၂ ပတ်လောက်ပေးပါ။ ငါ ima ကောင်းဖို့သေချာတယ်))))
နေ့ 52 update ကို-PIED အတန်ငယ်, ကုသအပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ကောင်းပြီယောက်ျားတွေကနောက်ဆုံးတော့ happend ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးနောက်ဆုံးညမှာကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ကငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး BJ ကိုရရှိခဲ့ပြီး၎င်းတွင် ၀ င်ရောက်ရန်အခက်အခဲမရှိခဲ့ပါ။ ၁၀-၁၅ မိနစ်ကြာသည်အထိခဲယဉ်းစွာရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်မပြီးခဲ့သော်လည်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
တစ်လ - Orgasm sensation နှစ်ဆရှိခဲ့သည်
ဒီဟာကိုမျှော်လင့်မထားခဲ့ပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါ့ရဲ့အော်ဂဇင်တွေပိုပိုပြီးအားကောင်းလာတာသတိပြုမိလာတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကစိတ်ကိုလန်းစေတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ED အချို့ရှိပေမယ့်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး Fapping ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် ED's ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျဆင်းမှုကနေယုံကြည်မှုထပ်မံမြင့်တက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှမတွေ့ဖူးပေမယ့် fapstronauts ချင်းတွေကတော့ငါဟာတူညီတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အမျိုးသားတွေကြားမှာထူးဆန်းတဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုခံစားရတယ်။ ဒါကကူညီပေးသည်။
ငါတစ်ပတ်လုံးညစ်ညမ်းသောအခမဲ့သွား။ ငါ့ PIED သွားလေ၏! porn အခမဲ့သွားဆက်လက်လှုံ့ဆျောမှုသာ။
ကျွန်တော်ဒီမိန်းကလေးကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင်တွေ့ခဲ့ဖူးပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကငါနှင့်ချိတ်ဆက်မိခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါမထနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာမျှဝေချင်တယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုဟာတကယ့်ပြproblemနာဖြစ်တယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာငါဒီရောဂါမရှိဘဲတစ်ပါတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပါတယ် ဒီကနေ့မှာငါတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါပဲ။ လိင်ကိစ္စကောင်းပါတယ်။ ငါမထနိုင်အောင် (ဒါမှမဟုတ်ဆက်ထားဖို့) ကိစ္စမရှိဘူး။ ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံမရှိခြင်းကငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ထိတွေ့မှုရှိစေပြီးကျွန်မရှေ့မှာရှိနေတဲ့လှပတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ဘယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကမှားယွင်းနေတယ်။
ငါဝေမျှရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်ဂုဏ်ယူရုံသာမကရလဒ်ကိုလည်းနှစ်သက်ပြီး၎င်းကိုမစွန့်လွှတ်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကိုအားကိုးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါ။
Fam ကိုသတိရပါ၊ အဲဒါက x ကိုရက်ပေါင်းများစွာမသုံးရန် porn ကိုရှောင်ရှားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းမှပေးသောအလွန်လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်သင်၏မှီခိုမှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်သင့်အား 'ပျော်ရွှင်မှု' နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသောခံစားချက်ကိုပေးသော်ငြားသင့်ကိုသင်စိတ်ပျက်စေပြီးလိင်ကိုနှစ်သက်သင့်သည်။
60 နေ့ရက်များအစီရင်ခံစာ! ထိုသို့ဆင်နွှဲနေတဲ့စိုစွတ်သောအိပ်မက်!
ကိုယ့် noFAP ကိုရက် ၆၀ ရောက်ပြီ၊ ဒါတော်တော်ခက်တယ်! အပြင်းအထန်တိုက်တွန်းမှုတွေပြန်ဖြစ်လာပြီ။ မနေ့ကငါထူးဆန်းတဲ့စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်! အိပ်မက်ထဲမှာအိပ်မက်မက်နေစဉ်မှာငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်နေသည်၊ ငါကဲ့သို့ woooow ကဲ့သို့ဖြစ်သည်
ငါမနေ့ကငါအနားယူခဲ့ပေမယ့်တစ်ယောက်တည်း Porn မပါဘဲတစ် ဦး တည်းဝန်ခံဖို့ရှိသည်, ထိုသို့ WOW ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ငါမျှော်လင့်မထားချင်ပေမယ့်ငါ့ ED ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့တယ် ... ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကငါယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိခဲ့တယ်၊ တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့စိုက်ထူကိုငါမဖုံးနိုင်ဘူး။ ငါဟာငရဲလိုခက်ပေမယ့်မသွားခဲ့ပါဘူး ကိုယ့်စိန်ခေါ်မှုကိုအောင်မြင်ပြီးပန်းတိုင်သို့ရောက်ချင်သောကြောင့် - ၉၀ ရက်…
ငါ reboot သွားပြီထင်တယ်လမ်းပေါ်ကလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာ၊ ဒါမှမဟုတ်ထွက်အလုပ်လုပ်စဉ်ငါ့လိင်စိတ်ကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ် ...
ဒါပေမယ့်ပြproblemနာကအပြင်းအထန်တိုက်တွန်းပါတယ်! ကိုယ့်ရေခဲကိုတောင်ရေအေးထဲထည့်လို့ရတယ်။ အချိန်တိုင်းမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ပိုနိုင်သမျှခုခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
လူမှုရေးအရ, ငါထွက်သွားဖို့, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူသောက်စရာရှိသည်ဖို့ပိုပြီးပွင့်လင်းတယ်, ငါလူသစ်ငါထင် ... ဒါဟာမိုက်မဲကြောင်းပြောပေမယ့်ငါကရှိသည်ခံစားချက်! သူငယ်ချင်းအချို့ကငါညတိုင်းငါလိင်ဆက်ဆံမည်ဟုထင်မြင်ယူဆကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည်။ တကယ်လို့မင်းတို့ fapping ကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး Flatline၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ Streak ရဲ့အစမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါ (တကယ်သိရင် !!) တကယ်တော့မင်းကပိုပြီးပွင့်လင်းလာတယ်၊ ပိုပြီးရယ်စရာကောင်းတယ်၊ လူများတို့၊ ငါ့နိဂုံးချုပ်ပဲ
လာမယ့်လအတွက်ငါ့ကိုကံကောင်းပါစေ! ငါနှင့်အတူပါ ဝင်၍ ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ကြလော့။ (မော်ရိုကိုသို့တစ်ခေါက်! လာပါ။ လူတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်သည်!)
ယောက်ျားတွေဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအိပ်ရာဝင်တော့မယ့်အချိန်၊ ဒီအချိန်ကိုအခြားအချိန်လောက်မှာတင်ပို့တော့မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်စုံတစ် ဦး ကိုဒီညကူညီလိမ့်မယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ဤ“ အသိုင်းအဝိုင်း” တစ်ခုလုံးအပေါ်နောက်ခံအချက်အလက်တစ်ခုခုပေးဖူးမလားကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ပထမနှစ်ကောလိပ်တွင်ဤအရာများကိုတခါတရံထိမိလဲမိသည်။ David DeAngelo ရဲ့ပစ္စည်းအချို့ထဲကိုဝင်လာတယ်။ ငါနာမည်တောင်မမှတ်မိတော့ဘူး .. ပြီးတော့မင်းရဲ့ကျောင်းပရ ၀ ုဏ်ကိုစောစောစီးစီးဒီလောက်စောစောစီးစီးတွေ့ပြီ ဒါကထူးဆန်းတဲ့“ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်” များ၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုတကယ်ကိုမ ၀ င်ခဲ့မိတာပါ။ “ cocky / ရယ်စရာ” နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပေမယ့်ဒါကိုကျွန်တော်မလုပ်မိခဲ့ဘူး၊ အဲ့ဒီအခါမှာ Unbreakable ရတယ်။ စတင်ခဲ့တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလမ်းလျှောက်သွားပြီးအမှတ်ပြန်ရလိုက်တယ်။ နွေရာသီမှာကျွန်တော်ဒုတိယနှစ်တက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ပိုကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရလာတယ်။ နွေရာသီမှာကျွန်မပိုပြီးကောင်းမွန်လာတယ်။ ယုံကြည်မှုတိုးလာတယ်၊ နံရံတွေအများကြီးကိုဖိချလိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်တွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ နောက်ထပ် .. အငယ်တန်းတစ်နှစ် - ပို။ ပင်ပိုကောင်းလာပြီ, အကြီးတန်းနှစ်, အမှန်တကယ်ကဆင်းရိုက်မှစတင်, ပြီးတော့ဒီနေရာမှာငါကနည်းနည်းများအတွက်ယနေ့ကောလိပ်ကျောင်းမှထွက်ဖြစ်၏, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဘို့အကောင်းကောင်းလုပ်နေတာ, ကြောက်မက်ဘွယ်ရည်းစား, etc နှင့်ပြန်လှည့်- ယုံကြည်မှုရဖို့၊ မိတ်ဆွေသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းများစတင်ခြင်း၊ လူမှုရေးအရကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးများနှင့်“ အအေးချဉ်းကပ်ခြင်း” သို့တက်ခြင်း၊ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းအပြင်အခြားအရာများလည်းပါဝင်သည်။ ဒီခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး .. .. ငါတကယ်ရလာတဲ့အချိန်ပေါ့။
ငါတကယ်ရလာဒ်တွေရလာတဲ့အခါ၊ မိန်းကလေးတွေဟာငါနဲ့အတူအိမ်ပြန်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်မှာ၊ ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကနေကူးစက်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါ့အတွက်အခက်ခဲဆုံးပဲ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ ဦး နှောက်အများဆုံးပျော့ပျောင်းသောနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်သည် ၂၄/၇ ကန့်သတ်ချက်မဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့် ၂၀ ကျော်အစောပိုင်းကာလများအတွင်းကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောဘဝ၌မရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနာရီပေါင်းရာနှင့်ချီရာပေါင်းများစွာ (ဖြစ်နိုင်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာ) ကိုလှုံ့ဆော်ရန်ရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ။
ငါချိတ်ဆက်တဲ့အခါ .. ငါ့ ဦး နှောက်ကဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမလဲမသိဘူး။ တခါတရံမှာငါအဆင်ပြေပေမယ့်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတော့ porn ကိုစကြည့်တုန်းကလိုမျိုးပေါ့။ ဒါကြောင့်ဝီစကီဒစ်ခ်ဒါမှမဟုတ်ဘာကိုမဆိုအပြစ်တင်မိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမရခဲ့ရင်တောင်ပြproblemsနာတွေကြုံခဲ့ရတယ် အော်ဂဇင်မဖြစ်နိုင်၊ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတာစသည်စသည်ဖြင့်ပေါ့။
နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုတိုးတက်အောင်၊ ဤအရာများကိုသင်ယူခြင်း၊ ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်မိန်းကလေးများအားကျွန်ုပ်နှင့်အတူပြန်လာရန်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာအလုပ်အားလုံးမှာကျွန်ုပ်လိုချင်သောအရာနှင့်အလွန်နီးစပ်ခြင်းဖြစ်သည် ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ပြီးတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်ရာထဲမှာအဝတ်မဝတ်ဘဲနေပြီးငါ့ကိုကြည့်နေတဲ့နာကျင်မှုနဲ့“ မင်းဟာငါ့ကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်” (တစ်ကြိမ်ထက်မကဖြစ်ခဲ့)
အခုတော့ HIGH ငါ့ကိုနှင့်ဤငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်မှအပေါ်နီးပါးတစ်နှစ်ရှာဖွေနေ၏ LOW ယူခဲ့ပါတယ်။ ငါပေးသောအချို့ကူညီပေးခဲ့သည်, ကူညီရန်ကြိုးစားမှကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုတစ်တန်ကြိုးစားခဲ့ပြဿနာကိုရှာဖွေ Install လုပ်နိင်အချို့သောအရာ၏, ဒါပေမယ့်ငါကဒီဘ်ဆိုဒ်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ငါကိုဖတ်ပြီးတော်တော်လေးအများကြီးတိုင်းဆောင်းပါးဆက်စပ်နိုင်သည်အထိဘာမျှတကယ်ပဲငါ့ကိုမထိ။
ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သင်၏ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုစစ်ဆေးခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သင်နှင့်သင်၏ (ဖြစ်နိုင်သော) ဆက်ဆံရေးကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမည်မျှထိခိုက်သည်ကိုနားလည်သည်အထိပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်ပါက -
ဒုက္ခအမျိုးသမီးနှင့်အတူကတက်လာပြီ, ဒါပေမယ့်အင်တာနက်က porn နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာ
“ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး” ရရန်လက်စွဲသို့မဟုတ်ပါးစပ်လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်သည်
နီးပါးနေ့စဉ် porn မှာရှာဖွေနေ
(၂၅) နှစ်အောက် (သင်ကကျွန်ုပ်အသက်အရွယ်လောက်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကရရှိနိုင်သမျှလွယ်ကူစွာဖြင့်သင်သည်ဤထောင်ချောက်ထဲကိုအလွယ်တကူရောက်သွားနိုင်သည်ဟုယူဆသည်)
သင်ဤအရာကိုစတင်လေ့လာခဲ့ပြီးမိန်းကလေး (သို့မဟုတ်များစွာသော) မိန်းကလေးများနှင့်မပေါင်းသင်းဘဲညစ်ညမ်းမှုကိုအထောက်အကူအဖြစ်အသုံးပြုသည်
ငါ့ကိုမျက်နှာသာမဒီ site မှာကြည့်ယူပါ။ အခုဆိုရင်ကျွန်မဟာငါးလလောက်ကြာတော့ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲငါ့အတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာမရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူး။။ အောက်ဖော်ပြပါ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကအရာအားလုံးကိုပိုမိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီး၎င်းကိုထောက်ခံရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများစွာရှိသည်။ သတင်းကောင်းမှာညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများနှင့်စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်း (လွယ်ကူသောသိုမဟုတ်) ရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ
ငါတကယ်ဒါကတစ်ယောက်ယောက်ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ် ဒီအရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရပြီးလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကပင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒါဟာအဓိကပြproblemနာပဲ၊ ငါ့မျိုးဆက် (နှင့်နောက်ပါ ၀ င်သူများ) သည်ကြီးပြင်းလာပြီးရင်ဆိုင်ရမည့်အရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမျိုးအစားလွယ်ကူစွာအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောဤအမျိုးအစားကိုပထမဆုံးစောသောသူများဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထိတွေ့မှုရရှိရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။ ဒါကကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
(၂) ရက်သတ္တပတ် (၁၃) ရက်ဒီနေ့ 13 ပတ်ကျင်းပသင့်တယ်။ ED ကတော်တော်လေးတိုးတက်လာပြီ။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် chaser effect ကငါ့ကိုချော်စေတယ်…
ဒါကြောင့်သောကြာနေ့ညမှာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးကျွန်တော့် ED ဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီထင်ရပါတယ်။ ဒါကအမြဲတမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ငါမသေချာဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြာမြင့်တဲ့တကယ့်ကောင်းသောစိုက်ထူရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်တဖန်ထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောခံစားရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ချိန်လုံးသံသယ ၀ င်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
ဝမ်းနည်းစရာကငါပြင်းပြင်းထန်ထန် chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကြုံတွေ့နှင့်နောက်တစ်နေ့နံနက်ပြန်လာ။ ငါမူကား၊ ကျွန်တော့်ဇနီးကကျွန်တော့်ကိုအိပ်ရာထဲထားလိုက်တယ်၊ ငါထင်တဲ့ပြproblemနာကနံနက်စောစောအိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ရင်းငါ့အကြိုက်ဆုံးနယ်ပယ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့တယ်။ ငါမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ကြ။ ငါရပ်တန့်ဖို့စီမံခဲ့ပါဘူး သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါ့ကိုပယ်ထားလို့ထင်ပါတယ် ထိုအခါငါမသိစိတ်တစ်ပိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ "ကောင်းစွာသင်ယခုမှုတ်ကြပြီဒါကြောင့်အားလုံးထွက်သွားကြ" ၏အတွေးအခေါ်သို့ရတယ်။ မိုက်မဲ
ငါဘယ်တော့မှနောက်တဖန်က 12% ကတိကဝတ်အုပ်ချုပ်မှုကိုပေးခြင်း, masturbate လို့ငါ့ကိုအများကြီးကူညီလုပ်ခဲ့တယ်ပြောကြသောအခါအဘယျသို့ငါသော်လည်းပြောနိုင်ကြောင်း 100 ရက်ပေါင်းအစောပိုင်းကဖြစ်ပါတယ်။ ငါကနေအမြဲတမ်းရှောင်ကြဉ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ထင်ပါတယ်။ ဤသည်သောအရာတို့ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုငါ့ကိုပိုပြီးသတိထားမိစေတဲ့အလေ့အကျင့်ပြေးလာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါကလုပျနိုငျသေချာဖြစ်၏။
ဒီတော့ဒီနေ့ ၂၄ နာရီလုံးလုံးအငွေ့ပျံကုန်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးလို့ငါထပ်ခါထပ်ခါကျူးလွန်မိနေပြီ။ ရိုးရှင်းပါတယ် ဒီဟာညှိနှိုင်းလို့မရဘူး ငါ့ဘ ၀ ကိုရှင်သန်လိမ့်မယ်။
နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ့ရင်ဘတ်ချွတ်ဒီရဖို့လိုတယျ။ နှိမ့်ချ Feeling ဒါပေမယ့်လည်းကတိကဝတ်မှာအခက်ခဲဤအချိန်လုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့် feeling ။
သတင်းကောင်း! ဒီပစ္စည်း Reading တကယ်ပဲငါ့ကိုမကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါ 25 ကနေအများကြီးက M-ing နဲ့ဖြစ်ကောင်း M / 13 ကနေ, P-ing, တစ်ဦး 14y အထီးဖြစ်၏။ ငါအလေ့အထထဲကလုပ်နေတာခဲ့သည်။
ထို့နောက်အချိန်များများကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကိုဖွင့်လှစ်ရန် ပို၍ ယူခဲ့သည်။ စိတ်ကူးများပိုကြီးလာသည်သို့မဟုတ်ပိုမိုခက်ခဲသော P ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ရုန်းကန်ရလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒီကိစ္စကကျွန်တော့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအစကစတင်ခဲ့တာ၊ ငါ့ကိုဖျော်ဖြေဖို့လုံးဝမတားဆီးခဲ့ပါဘူး၊ လွန်ခဲ့သော (၇) နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ဆက်ဆံရေးကိုမထိန်းသိမ်းခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာဤပြproblemနာနှင့်၎င်းအားဖြစ်ပေါ်စေသောတင်းမာမှုအားလုံးပင်ဖြစ်သည်။
အခုတော့သတငျးကောငျး: ငါအကြောင်းမရှိသဘောပေါက်လာတဲ့အခါငါငါသည်ချက်ခြင်းသလောက်ငါဖြစ်နိုင်သည်တတျနိုငျသအဖြစ်က M-ing ချွတ်ကျင်းပခဲ့သောနောက်ဆုံး6ရက်သတ္တပတ်ကျော် P. တက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ (ငါ့အကိုအကောင်းဆုံးစံချိန်9ရက်ပေါင်းခဲ့သည်!) ငါသည်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် kegels တွေအများကြီးကိုပြု၏။
အခြေခံအားဖြင့်၊ ငါရုံတနင်္ဂနွေများအတွက်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူသွား။ ကြောင့်အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတောအုပ်ထဲကနေမထင်ဘူး ငါနှစ်ပေါင်းများစွာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများအားလုံးထံမှတော်တော်လေးစိုးရိမ်ပူပန်ရ။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်နိုင်တာအားလုံးကိုမင်းပြောပြချင်တယ်၊
ငါ porn ကိုရပ်တန့်ကတည်းကငါ့အော်ဂဇင်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်
တကယ့်တကယ်တော့ငါကအကောင်းဆုံးသောအော်ဂဇင်ရဖို့အတွက် porn နဲ့ edge ကိုနာရီပေါင်းများစွာကြည့်ခဲ့တယ်။ ငါလုံးဝရပ်တန့်ပြီးကတည်းကငါ့အကြောင်းကိုအော်ဂဇင်စာသား 2x ပိုကောင်းများမှာ 10 ပတ်ခန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ shit ရပ်တန့်တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်။
ကိုယ့်ကဒီမှာနေဖြင့်ရပ်တန့်ရန်ရှိသည်များနှင့်ဂယ်ရီနှင့်ဤ site ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါမ PMO နှင့်အတူမြေတပြင်လုံး 8 ရက်သတ္တပတ်သွားလေ၏. NO relapses ။ အကြှနျုပျ၏သာ orgasm လိင်ကနေခဲ့ကြသည်။ ငါပြောတာလိုပဲငါ ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်သေးသေးလေးလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကကြီးတယ် !!!! ငါခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်ငါဤမှတဆင့်သွားသောအမှန်တကယ်ဝမ်းသာတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမှလွတ်မြောက်စေခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်၏လိင်တံနှင့်စိုက်ထူမှုများကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လာသည်။ ငါကလူတစ်ယောက်လိုပဲငါလိင်တံကိုချစ်တယ်၊ တစ်ဖန်ကျေးဇူးတင်စကားဂယ်ရီ !!!! ငါကတဆင့်သွားယောက်ျားတွေမျှော်လင့်ချက်အချို့ပေးရဒီ post ခဲ့ !!!
- PMOing ... အဲဒါအချိန်တိုင်းငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိထားမိလာတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို 1 မှ3ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်။ အခု ၂၆ ။
- ချစ်ခြင်းမေတ္တာချမှတ်ခြင်းတွင်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောကြိုးစားမှုများစွာရှိခဲ့သည် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အရှက်ကိုကယ်တင်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝရှောင်ရှားရန်စတင်ခဲ့သည်။
- လွန်ခဲ့သော ၅ လခန့်က၊ အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုအသစ်တစ်ခုအလုပ်သည်အထိ5ပတ်ကြာအောင်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်။
- ကျွန်ုပ်၏ PMO လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဟောင်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြာအောင်နေပါ။
လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းကိုစိတ်ကုန်သွားသောကြောင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည် (ပျက်ကွက်မှု ၂ ခုနှင့်) PMO ကိုထပ်မံရှောင်ကြဉ်ခဲ့သည်။ ငါအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုငါပြောပြလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်သွားတယ်၊ ပြီးတော့သူကရက်စွဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ပြီးတော့ဒုတိယရက်စွဲ။ ပြီးတော့အဲဒီရက်အကုန်မှာအရာရာအပူရှိန်ရှိတဲ့သူမရဲ့နေရာကိုကျွန်မတို့ပြန်သွားခဲ့ကြတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အခက်အခဲရှိခဲ့ပေမယ့်သူကကျွန်တော့်ကိုပျော့ပျောင်းစေခဲ့တယ်။ ငါကအေးမြကစားနှင့် foreplay ကြီးမြတ်အောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သူမကိုအကြိမ်အနည်းငယ်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်လုံ့လဝီရိယရှိရှိအလုပ်လုပ်ရန်လုံလုံလောက်လောက်အနားယူခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကတိရိစ္ဆာန်များနဲ့တူတူသွားခဲ့တယ်၊
ကွန်ဒုံးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်ပိုမိုလိုအပ်နေသော်လည်းသော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်မခံစားရနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းချီးရောနှောခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်နှစ် ဦး စလုံး။ ဒါပေမယ့်ငါဂရုမစိုက်ဘူး; သစ်သားရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ရက်စွဲကိုနှစ်သက်နိုင်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအောင်ပွဲများဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့ဆီမင်းပုန်းအောင်းနေတာကိုအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူမတစ်ချိန်ချိန်မှာသူကဘာသာစကားပြောနေတာလို့ထင်တယ်။ အနာဂတ်ကတိပေးသည်။
ငါဝန်ခံမည်, ငါ့အခွအေနဒီဘုတ်အဖွဲ့ရှိရှေးရှေးအချို့ကဲ့သို့မကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ - ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ၏အပြproblemနာ၏ 80% စိုးရိမ်ပူပန် / စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ခဲ့သည် (ဒါပေမယ့် PMO ၏တစ်သက်တာဆက်ဆက်ကူညီမပေးခဲ့ပါဘူး) ။ ငါကြိုးစားအားထုတ်သမျှနဲ့အောင်မြင်မှုရနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါဆက်ကပ်အပ်နှံထားသူမည်သူလည်းပိုကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံ! အောင်မြင်မှု ????
ငါ့ရည်းစားကျော်သွားပြီ။ များသောအားဖြင့်သူမသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအနှိပ်ခံခြင်းသို့မဟုတ်သူမအားစုပ်ယူခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်အားပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကူညီရန်မလိုပါ။ ပြီးခဲ့သည့်ညကသူမသည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခြင်းထက်ပိုမိုခက်ခဲကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါသဘောတူလိုက်တယ်5စက္ကန့်လောက်ကြာတော့ငါလာတယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ reboot အဆုံးသတ်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝအောင်မြင်ခြင်းရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဟုဆိုလိုပါသလား။ တစ်နေ့အကြာတွင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောစိုက်ထူမှုများမရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကအော်ဂဇင်ကကျွန်ုပ်ကိုပြန်ဖွင့်ခဲ့သလား။ ယောက်ျားများသည် reboot တလျှောက် (၈ လ) အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ဤအစာရှောင်ခြင်းသည်ပုံမှန်လား။
ကျွန်ုပ်၏ဟော်မုန်းများသည်ခေါင်မိုးပေါ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်... ငါအရမ်းအားကောင်းတဲ့တလျှောက်လှိမ့်။ ငါရူးသွပ်မသွားမီတစ်ခုခုရေးခဲ့ရသည် စိုက်ထူခြင်းမရှိရာမှထွက်ပေါ်လာနေကြသည် ... အဘယ်သူမျှမ Pun ရည်ရွယ်ပါသည်။ ငါခံစားရတယ်တိရစ္ဆာန်လိုခံစားရတယ်အပြင် နေ့ ၉၀ သည်အလှည့်အပြောင်းဖြစ်နေပြီ။ ဒါကြောင့်ဒီအတိတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကလှပသောဆံပင်ညိုလေးများနှင့်ဆုံခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းအချို့နှင့်ကျွန်ုပ်ရေကန်ကစားနေစဉ်သူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏နံပါတ်ကိုရလိုက်ပြီးနောက်ညတွင်ဒီ busty blond ဖုန်းကိုရလိုက်သည်။ ငါတနင်္ဂနွေမိန်းကလေးတစ် ဦး သည်ငါ့ကိုထွက်မေးမြန်းရသောတန်းစီရက်စွဲရှိသည်! ငါ့မှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။
သင်တို့အဘို့အထွက်ယောက်ျားတွေထွက်နေဆဲရုန်းကန် ... ကကပ်။ အားစိုက်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုကာလသည်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ထွန်တုံးပြီးသည်နှင့်သင်သည်အခြားအဆင့်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ သို့သော်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခု…သို့သော် အကယ်၍ သင်ဤအရာအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ပါကအခြားအရာအားလုံးကိုရနိုင်သည်။ ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုမတွေ့ခင်ငါ PMO ကိုဖြတ်ဖို့အကြိမ်များစွာကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခုတော့ငါရက် ၉၀ လောက်ရောက်တော့မယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီအသိုင်းအဝိုင်းမရှိရင်ငါအဲဒီလိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်တံခါးသစ်တွေဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီဟာကပိုကြီးတဲ့ခရီးကိုခြေလှမ်းပဲ။ ထယ်!
ငါကဒီပျဉ်ပြားနဲ့ YBOP site ကိုကြည့်နေတယ်၊ ​​ငါအလကားရဖို့ရုန်းကန်နေရင်းအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲလောက်။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၆၀ မှ ၇၀ အတွင်းရှိပြီးအသက် ၂၀ ရှိ ED နှင့်အတူရှိခဲ့ခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ဒုတိယလတဝက်လောက်ကတကယ့်လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ကိုတပ်မက်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးတော့ငါထွက်ခွာသွားဖို့ငါ့နေရာကိုပြန်လာခဲ့သမျှအကောင်းဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရခဲ့တယ်။ ၀ မ်းဗိုက်မှာ ၀ မ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးငါအရင်ကထက်ပိုမိုအားစိုက်လာတဲ့အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။
ငါလများအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အလွန်အမင်းပျော်ရွှင်ခဲ့သည်ဟုပြောစရာမလိုတော့ပါ။ ဖြစ်ပျက်တော့မည်ဟုထင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုကျွန်ုပ်ချွတ်ယူသောအခါကျွန်ုပ်၏ခါးပတ်၌ခေါင်းကိုသူမနှင့်ထိပ်တိုက်ထိုးလျက်နေ၏။ သူမကကျွန်တော့်ရှပ်အင်္ကျီကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါရယ်မောရွှင်လန်းစွာနဲ့ကျွန်တော့်အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာဖောင်းနေတဲ့အသားကိုပွတ်သပ်လိုက်တယ်။ BAM ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အစဉ်အမြဲငါတွေ့ဖူးသမျှသောသုတ်ရည်အထူဆုံးအဖြူရောင်အများဆုံးသောပမာဏနှင့်ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကိုစိတ်စွဲလမ်းစေသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
သူမ၏ရှပ်အင်္ကျီပေါ်ရှိတန်ချိန်များ၊ လည်ပင်းတွင်ကြီးမားသော glob နှင့်သူသည်လူတစ်ယောက်ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမသိခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောဆူညံသံကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါတတ်နိုင်သလောက်ရယ်စရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ညီ (၁၈) ကသူမရဲ့ရှပ်အင်္ကျီပေါ်ကလှေကားကဆင်းလာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ သူနဲ့ငါ့အဖေနှစ် ဦး စလုံးငါအနားမှာရှိနေတုန်းတစ်နေ့လုံး hyenas လိုမျိုးပျော့ပျောင်းနေတယ်။ ငါဒီလောက်ခဏလောက်နေရမယ်လို့မထင်နဲ့ဒါကငါ့မိသားစုရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကြောင်းကိုငါ့မိသားစုမျှော်လင့်မထားဘူး (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုပြောပြဖို့မစီစဉ်ခဲ့ဘူး) ။ ဒီအဖြစ်အပျက်အပြင်ငါအာရုံစိုက်နေတဲ့ချန်ပီယံလိဂ်လိုခံစားရတယ်ငါဟာအကောင်းဆုံးစကားလုံးပဲ၊ P ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေသောဤပြproblemနာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တင်သည့်အစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့မျှမရည်ရွယ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဆိုးရွားပြင်းထန်သောစိတ်ရောဂါခံစားခဲ့ရသည့်ဖိုရမ်ကိုသာကြည့်ခဲ့သည်။ ငါ့နည်းနည်း ငါဟာရှက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့ Fort Jackson ကိုမကြာခင်ပြန်လာတော့မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးငါ့ရဲ့ပြည်နယ်ကိုဘယ်သူသိလဲဆိုတာဂရုမစိုက်ပါဘူး။
ငါအချိန်မတိုင်မီဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမိန်းကလေးကျော် nutted nutted သော်လည်းအစဉ်အဆက်အဖြစ်မင်္ဂလာ။ ငါရှိရာထက်နေဆဲကောင်း၏။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ဒါကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးပို့စ်ပဲ။ ဒါကြောင့်ငါမှားနေသောနေရာ၌မတင်မိစေရန်ငါတကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီဖိုရမ်ကိုကျွန်တော်တစ်လလောက်လာလည်ပတ်နေတယ်။ porn ကမကောင်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တာဘယ်လောက်မှမသိဘဲအလွန်အမင်းအံ့အားသင့်မိသည်။ တကယ့်ကိုကြီးလေးတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆပဲ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံအချို့ကိုမျှဝေပါမည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှ PMO'd များသော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်အတွင်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း။ အစပိုင်းမှာတော့စိတ်ကူးယဉ်ရုံသာမကစိတ်ကူးယဉ်ရုံသက်သက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ပိုင်းမှာငါလည်း porn အချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းငါ၌မိန်းကလေးများစွာရှိခဲ့ပြီးအချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုမှာအတော်အတန်နည်းကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်၏မကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါအလေးအနက်ပြုမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အများစုအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းအမှန်တကယ်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။
လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသင့်မျှော်လင့်ချက်သည်သင်၏ ဦး နှောက်သည်လိင်မှုကိစ္စအလွန်ဆိုးရွားသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပုံရသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည်အလွယ်တကူကြည့်ရှုခြင်းအတွက်နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင် (M နှင့် O ကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပြီး) ထို့နောက်မိန်းကလေးတ ဦး အားနှိုးဆွရန်တကယ့်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ငါအပြည့်အဝစိုက်ထူနိုင်လျှင်ပင်ငါလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုလုံးကာလအတွင်းကထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဘူး။ ဒါဟာငါ့ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးနဲ့တူပြီးငါ့တကိုယ်လုံးလည်းပျင်းရိလွန်းလို့ငါနဲ့ငါ့ရည်းစားလိင်လိုအပ်ချက်တွေကိုတကယ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲခဲ့တယ်။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့အတွက် ၀ င်ပြီးအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားသလိုပဲ။ ငါ "အလုပ်" ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတောင်သုံးဖူးတယ်။ ဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူး၊
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်ကြည့်သောအခါသင်၏ ဦး နှောက်သည်ထုံထိုင်းသွားပြီးသင်အမှန်တကယ်သတိမထားမိဘဲ သင်၏လိင်ဆန္ဒသည်လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားပြီးသူမအားမည်မျှပူပြင်းစေကာမူ…မိန်းကလေးစစ်စစ်အားဖြင့်သင့်တော်သောနှိုးဆော်ခြင်းကိုသင်မရရှိနိုင်ပါ။ ဒီအရာအားလုံးဟာ 2D အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုတွေကနေအားလုံးခံစားမှုအတွေ့အကြုံတွေကနေလာတာပါ။ အဓိကအချက်ကအချိန်တိုအတွင်းမှာသင်ဟာလုံးဝမပျော်ပဲ၊ အဲဒါကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ခံစားမိသလိုပဲ…စစ်မှန်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးလိုပဲ!
ကျွန်မအခုနေတဲ့အံ့သြစရာရည်းစားရှိသည်, ငါတကယ်ကဒီထွက်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ငါကျော်လွန်ခဲ့သောတစ်လငါ၏အညစ်ညမ်းပါသည်ကျဆင်းသွားအစဉ်အဆက်ကတည်းကကျွန်မရဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်အတိုးသူမ၏အတွက်တဟုန်ထိုးကြောင်း (ကရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်) နီးပါးချက်ချင်းခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မနာလန်ထူရဲ့ start မှယခုငါ၏အ 33rd နေ့၌ဖွစျ၏။ ငါအားလုံး porn ဖြတ်တောက်ပါပြီ ငါစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းနေတုန်းပဲ။ ဒီကာလအတောအတွင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။
သူမငါ့ကိုနှုတ်ဖြင့်ကျေနပ်နေစဉ်, ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူ O အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအပြည့်အဝလိင်ဆက်ဆံမှုအဘို့အသွားချင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါပြီးသားသင်ကပြောနိုင်ပါတယ်: ငါ့နှိုးဆွမှုအဆင့်, အပျော်အပါးနှင့်အထွေထွေစိတ်ဓါတ်များအားလုံးလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသည်ပြီးခဲ့သည့်လက။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့အစီအစဉ်ကဒီလိုပါ။ ဘဝအတွက်ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမလုပ်ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်သာအော်ဂဇင်ပါ။ ၎င်းသည်လျောက်ပတ်သောပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ပြုလုပ်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုအမှန်တကယ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒါဟာငါဒီဖိုရမ်အတွက် posted ပါပြီကတည်းကအချို့သောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မလပေါင်းများစွာအဘို့ဤလမ်းခရီးတွင်ကြပြီ ငါဇူလိုင်လလယ်တွင် yourbrainonporn ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလွယ်ကူဆုံးလမ်းဖြစ်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ဆုံးသောပြည့်စုံ၏တဦးတည်းမထားပါဘူး။ တခါတရံငါလာကြပြီဘယ်လောက်ဝေးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း, တကယ်အံ့ဩမိန်းမောဖြစ်၏။ ငါသည်ငါ့စွဲမိမိကိုယ်ကို၏အမှတ်တရများပြုံးရယ်။ ငါတကယ် porn နေ့စဉ်လိုအပ်, အချို့အလျှော့သောနေရာများအတွက်ညစ်ညမ်းမှာကြည့်ရှုကြ၏။ မျိုးစုံအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမြိုးသမီးမြားကိုဆင်းလှည့်။ ဒါဟာတကယ်တစ်ဦးအရှုံးသမားသို့သငျသညျစေသည်: အမြဲအပြန်အလှန်အကြောင်းကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေလျက်နှင့်မ။ ဖြစ်ကောင်းကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးအတွက်အဆိုးရွားဆုံးအရာငါသနားကြင်နာတတ်တဲ့မဟုတ်ခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါတောင်မှမိသားစုဝင်များအခြားလူကိုကူညီဖို့လည်းအလုပ်များ PMOing ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ post အတွက်အမှန်တကယ် update ကိုငါလွန်ခဲ့သောတစ်ပါတ်ပတ်ပတ်လည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါမှာ ED ရှိခဲ့ဖူးပေမဲ့ငါပျောက်ကင်းသွားပြီလို့စစ်မှန်တဲ့ပြောနိုင်တယ်။ ငါအခန်းထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုနမ်းနေတုန်းပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ရေရှည်အလားအလာရှိသည်ဟုမထင်သောကြောင့်အတိတ်ကာလကမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ။ အကယ်၍ သင့်မှာအိပ်ရာထဲမှာမီးထွန်းထားသည့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိရင်၊ တစ်ခုခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနမ်းနေကြတယ်၊ အဝတ်တွေလည်းစထွက်လာတယ်။ ငါ၏အစိုက်ထူပြissueနာမရှိဘဲတစ်ခုလုံးကိုအချိန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
ငါရယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအခုအချိန်မှာစဉ်းစားနေတာသတိရလို့ပေါ့၊ ငါငုံ့ကြည့်သည့်အခါတိုင်းငါ့စိုက်ထူရှိ၏ ငါတိုင်းဤမျှလောက်မကြာခဏ lls စစ်ဆေးနေခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့စိုက်ထူမှုကောင်းသည့်အခါလိင်သည်ကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုမပြုပါ။ အကြှနျုပျ၏သုတ်ရည်လွှတ်လည်းအရူးရှိ၏ သူမသည်သူမတိုင်းကိုမြင်လျှင် lls အများဆုံးကပြောသည်။
အားလုံးအားလုံးအတွက်, လုပ်ငန်းစဉ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖိုးထိုက်။ အဆိုပါချောင်းမြောင်းင်း၏တန်ဖိုးရှိ။ PMOing အသက်စွန့်ပစ်သည်။ မျှော်လင့်တခြားလူတိုင်းကိုငါ့အချက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးရရှိသွားတဲ့။ ကံကောင်းပါစေ။
ယနေ့တွင်အဘယ်သူမျှမ PMO နှင့်အတူနေ့က 35 ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအမြီးအားဖြင့်ဒီတစ်ခုရှိသည်ကဲ့သို့ခံစားငါနဲ့ချောင်ကိုဖွင့်ဖို့မသွားပါ၏!
စနေနေ့ညမှာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ခဲ့ပြီးအရာအားလုံးပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ အဆိုပါထုံခြင်း, နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်မတည်ရှိသုတ်ရည်လွှတ်…အားလုံးကုစား! ယခုအချိန်အထိအဓိက chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမတွေ့ရပါ။
PMO ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှဥစ္စာကိုဖြုန်းကဘာလဲဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူး။ ဒုစရိုက်ဖြေ, သင့်အိမ်ထောင်ဖက်စသည်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိဖို့ဟာနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချည်းနှီးပေးဆပ်ရန်အဘိုးလမ်းလည်းမြင့်မားသည်။ YBOP မှာသတင်းအချက်အလက်လက်တွေ့ဘဝမယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးရှိသောနိုး UP ခေါ်ဆိုပါ!
ဤတွင် Zenhabits ကနေအထောက်အကူဖြစ်စေ post ကိုပေါ်တိုတောင်းတဲ့ link ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ် PMO မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်တကယ့်အကြှနျုပျအဘို့သက်ဆိုင်ပါသည်။
လီယို Babauta ကရေးသား Post ကို။
ငါကအားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းတဦးတည်းနည်းနည်းလျှို့ဝှက်သင်ယူ: သင်သတိထားမိတဲ့အခါ, သင်ကပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သတိထားဖြစ်လာနေဖြင့်စတင်ပါ။ လေ့လာသူဖြစ်လာသည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆွေးနွေးချက်ကိုနားထောင် Start, သင့်စိတ်ထဲဘာကိုစောင့်ရှောက်မည်။ အာရုံစိုက်။ ဒါဟာလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ ဘာဝနာကဒီနှင့်အတူကူညီပေးသည်။ ငါသည်လည်းပြေးမှတဆင့်သင်ယူ - တစ်ဦး, iPod တလျှောက်တာမရသဖြင့်, ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာပြေးပြုပေမယ့်စောင့်ကြည့်သဘောသဘာဝနှင့်ငါ၏စိတ်ကိုနားထောင်ရန်ဘာမျှမရှိသည်။
ပြုမူဆောင်ရွက်မထားပါနဲ့။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုကြောင်းကိတ်မုန့်ကိုစားရန်သင့်အားတိုက်တွန်း ( "ရုံတစ်ကိုက်!") သို့မဟုတ်ကြောင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်သို့မဟုတ် running ရပ်တန့်သို့မဟုတ်အခြိနျမဆှဲပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောနေပေမယ့်သူတို့အညွှန်ကြားချက်အပေါ်ပြုမူဘူးသောအရာကိုနားထောင်ပါ။ ရုံ (စိတ်ပိုင်း) တုန်းပဲထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်နားထောင်ပါ။
မလွန်ပါစေသော။ , ဆေးလိပ်သောက်ကိုစား, အခြိနျမဆှဲ, ဒါမှမဟုတ်အပြေးဖြတ်ဖို့တိုက်တွန်း ... မလွန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာယာယီပါပဲ။ အများအားဖြင့်ကသာတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကြာရှည်ခံသည်။ အသက်ရှူနှင့်မလွန်ကြကုန်အံ့။
အဆိုပါဆင်ခြင်တုံတရားရိုက်တယ်။ သငျသညျတက်ကြွစွာသငျ့စိတျနှငျ့အငြင်းနိုင်ပါ။ ကပြောပါတယ်သောအခါ "One ကိုနည်းနည်းကိုက်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်!", သင်သည်သင်၏အူထောက်ပြပြောသင့်ပါတယ် "ဟုအင်းသောသင်ကပြောသည်အဘယ်အရာကိုသူအပေါငျးတို့ကအခြားအချိန်များရဲ့, အခုငါအဆီရယ်!" ကပြောပါတယ်သောအခါ "အဘယ်ကြောင့် သင်ဤနာကျင်မှုမှတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်တင်ထားတဲ့နေကြတယ် "သငျသညျဆိုသညျကားသင့်ပါတယ်" ဟုဒါဟာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖြစ်နာကျင်င်, သင်ယဇ်အဖြစ်ကိုကြည့်ပါလျှင်သူကကိတ်မုန့်ရှောင်ရှားရန်သာနာကျင်င် -? အစား, ကကျန်းကျန်းမာမာနှင့်အရသာကိုင်စွဲဖို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းရှိနိုင်ပါသည် အစားအစာများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး! "
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာငါဒီက web ကူး လာ. , တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ အစဉ်မပြတ်ငါကိုယ်ကဤပြဿနာရှိခြင်းခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောကောင်လေးဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်မှစ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ၂၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်မှ စ၍ ငါအမျိုးမျိုးသောညစ်ညမ်းမှုအမျိုးအစားများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက် porn ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မိန်းကလေး Porn ကြယ် ၂၀ ကျော်၏အမည်များကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
အမှတ်ရရန် .. ငါကအဝေးရောက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသော်လည်းငါ 2008 ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ခဲ့သည် .. သူမငါ့ကိုလာ 2008 Aprilပြီလသူမသည်ငါ့ထံသို့လာ။ ငါ ED ကိစ္စများရှိခဲ့ပါတယ်မသိခဲ့ပါငါ့ကိုခွင့်ပြု ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့မိန်းမနဲ့လိင်မဆက်ဆံခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ပြီး၊ ငါမှာ ED ရောဂါရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါ၊ သူမငါ့ကိုခေါင်းပေးသည်။ ငါသူမ၏ထိပ်ပေါ်မှာငါအခါ, သုတ်ရည်ဆီသို့ ဦး တည်သောပျော့သို့မဟုတ်ချောင်စိုက်ထူမရကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူမထိန်းချုပ်မှုအပေါ်တဲ့အခါမှာသူမနှေးကွေးသောလုပ်နေတာကိုချစ်သောကြောင့်သူကထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သူမနှေးကွေးသောလုပ်နေတာကိုနှစ်သက် ငါပျော့ပျောင်းတဲ့အခါမှာသူမကငါ့ကိုကြည့်နေတယ်။ သူမကငရဲလို .. ဘာမှားလဲ ..
ငါကြံ့ခိုင်ရေးမထင်မှတ်သောကြောင့်ငါသူမကိုငါ STERIODS ကိုသုံးပြီးဆင်ခြေပေးခဲ့တယ် .. ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူး .. ငါ့အရှက်ကွဲမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ပဲ .. Viagra ကိုတိတ်တဆိတ်လက်ခံခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာperfectlyုံရော၊ ကျရှုံးတာလား (ငါနိုးလာပြီးသူမလိင်လိုအပ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ငါထွက်ဆွဲထွက်ခြင်းမှပြန်လာသည့်အခါကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်လက်နက်အားအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဟုဆိုလိုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Viagra ကိုမယူခဲ့ဟုဆိုလိုသည်) .. အဆုံးသတ်မရဘူး
တိုတိုပြောရရင်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ (မိသားစုပြproblemsနာများနှင့်ပတ်သက်သောကြီးမားသော) ရန်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ဒါကအရုပ်ဆိုးပြီးကျွန်မကိုသူမကိုကွာရှင်းပြတ်စဲစေခဲ့တယ် .. ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ .. ငါကလူရှုပ်နေတဲ့အချိန်၊ ငါသူမကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ အကယ်၍ မိန်းမတစ်ယောက်ကမင်းရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိရင် .. မင်းကိုသူရိုက်တော့မယ် .. သူမငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးငါ့စိုက်ထူတဲ့ပြproblemsနာတွေအကြောင်းပြောနေတယ်။ ငါနင့်ကိုလိင်မဖျော်ဖြေနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမင်းရဲ့မိသားစုဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာကိုကြည့်ခွင့်ပေးတယ်။ ငါ့ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘူး
ပြီးတော့သူမကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ခင်၊ ကွာရှင်းခြင်းမလုပ်ခင်ရယ်စရာတွေလုပ်လေ့ရှိတယ်။ တစ်ခါတလေကျွန်မသူမနမ်းနမ်းတဲ့အခါသူမရဲ့ boobs တွေကိုထိမိတဲ့အခါ .. သူမကကျွန်တော့်ကိုအသှငျပွောငျး (သူမမျက်လုံးများကိုကြည့်ရှု, ငါ့ကိုနက်ရှိုင်းစွာသတ်ပစ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်) ) နှင့်ဟာသလမ်းပြောခဲ့သည် .. ဟေး, သင်မအောင်မြင်တစ်ခုခုစတင်ရန်မနေပါနဲ့ .. ဒါကြောင့်ငါ့ကိုနက်ရှိုင်းစွာသေဆုံးပေမယ့်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်ရူးသွပ်တယ် .. ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်မှဤလုပ်ခဲ့တယ်သိတယ်။ ။
ငါကျိန်ဆိုတယ်။ ငါ့ရဲ့ Balm မှာတက်တူးထိုးမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားမိတယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့၊ လူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတိပေးစာအဖြစ်တရုတ်လိုရေးထားတာတောင်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ရပ်တန့်နိုင်အောင် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီ .. မဟုတ်ပါ။ ငါတရုတ်မှမဟုတ်ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဒီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုမလာခင်ကျွန်မရဲ့ ED ကို porn နဲ့တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကတစ်ခုတည်းသောပြproblemနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်။ .. ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ porn / masturbation ကိုစကြည့်တော့တယ်။ တစ်လအကြာမှာ .. ငါမသွားနိုင်တော့ဘူး .. SASHA GREY ဗီဒီယိုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပါ။ လတွေ .. .. ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရတယ် .. ယုံကြည်မှု / ပျော်ရွှင် / ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမိန်းမကိုမကြည့်တော့တာပေါ့ .. အခုသူတို့ကိုမတူကွဲပြားစွာကြည့်နေပေမဲ့ .. (porn / masturbation မလုပ်ခင်၊ ငါဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အိုလူ၊ ဒီ ***** ဟာ sexy ဖြစ်နေတယ်။ ငါ့ရဲ့မှိုအစွန်အဖျားကိုသူမရဲ့နံရံတွေမှာထားပါ။ *** သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပါ .. ) အားလုံးညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ် .. ဒါပေမယ့်အခု .. ငါသူတို့ရဲ့အလှအပကိုလုံးဝကွဲပြားတဲ့နည်းနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်။
ဒီတော့ယောက်ျားတွေ ... မင်းရဲ့ဘဝမှာမင်းလိုငါ့ရဲ့အရင်လိုမျိုးခွေးမလေးတစ်ယောက်ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ် .. လုံးဝမထောက်ခံဘူး .. ဒါပေမယ့်ငါပြောနေတာ .. ဒီလိုမိန်းမမျိုးကမင်းကိုဘဝကိုမုန်းတီးစေနိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုသင်၏အားနည်းပွဲချင်းပြီးသိတယ်လျှင် .. သူမရှိနက်ရှိုင်းကိုသင်ထိမှန်မည်, အခါတိုင်းသငျသညျမနှငျ့တိုကျပှဲခဲ့ .. ဒါမှမဟုတ်သင်သူမ၏အကြောင်းကိုတစ်ခုခုပြော။
ငါ့ကိုယုံကြည်ပါလူတစ်ယောက်အတွက်တော့ဒီထက်ဆိုးတာကဘာမှမရှိဘူး။ ဒါဆိုမင်းရဲ့အတွင်းငြိမ်သက်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကျေးဇူးပြုပြီး .. အဲဒီမှာအားလုံးအဆင်ပြေနေပြီဆိုတာသိတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့ယုံကြည်မှု .. Porn / masturbation ကိုထွက်ပါ။
စကားမစပ် .. ငါမည်သူမဆိုနှင့်အတူဤပြဿနာကို share ကြလိမ့်မည်ထင်ဘယ်တော့မှ .. ဒါပေမယ့်ငါကဒီအသိုင်းအဝိုင်းမှတဆင့်သို့ရောက်လာသောဝမ်းသာပါတယ်။ ငါ .. ငါ့အတိုးတက်မှုပို့စ်တင်အားလုံးအကောင်းဆုံးယောက်ျားများစောင့်ရှောက်မည်။
PS ငါအရမ်း sexy အိန္ဒိယမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ ငါတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဆက်ပြောမယ်။
ငါမဆို porn ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးကတည်းကမင်္ဂလာပါခငျြးကိုခရီးသွားများအတွက်ကြောင့်6ရက်သတ္တပတ်ခဲ့။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက် ၅ ပတ်၊ ငါ့လိင်တံကိုထိပြီး ၄ ရက်အကြာမှာ။ မနေ့ညကငါအရမ်းဆိုးတဲ့ညတစ်ည ငါအိပ်လို့မရဘူး။ ညစ်ညမ်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေအကြောင်းတွေးမိတိုင်းကျွန်တော်လှဲချလိုက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါခေါင်းကိုတွားသွားတယ်။ ငါ့လက်ကိုအလိုလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကုသမှုခံယူသည်အထိမထိမခိုက်ရန်ကျွန်ုပ်၏ကတိတော်ကိုဆက်လက်ထားရှိရန်မှာတကယ့်စစ်ပွဲဖြစ်သည်။ ငါ့ ဦး နှောက်ကငါ့ကိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဟောင်း (PMO) ကိုပြန်သွားဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ထင်တယ် သတင်းကောင်းကငါမြဲမြံစွာမရပ်တည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါသည်ဤအနာတိုးတက်ကြောင်းကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသည်ဤဖြစ်စဉ်တွင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှိသည်။ ငါသည်လည်း porn မိန်းမနှင့်ငါ၏အကြားဆက်ဆံရေးထိခိုက်လျက်ရှိသည်ကိုမည်သို့နားလည်ရန်စတင်နေပါတယ်။
ငါကဲ့သို့သောအခြားအသစ်ကိုယောက်ျားတွေမှအကွံဉာဏျ, ဒီမှာအားလုံးပစ္စည်းမရရှိနိုင်ပါဖတ်ပါ။ သငျသညျထကျလွဲချော်သွားတာလေဘယ်လိုသင်ယူဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ပြဿနာအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ခဲ့ပြီးအလိုရှိ၏။ အစဉ်မပြတ်ငါကြားနေတုန်းပဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသင်တို့အဘို့ကောင်းသောကြောင်းကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့်ငါက porn နှင့်အတူကန့်သတ်အခြေစိုက်စခန်းအပေါ် OK ကိုသော်လည်းမပင်ဖြစ်သည်ပုံပါဘဲ။ သင့်ဦးနှောက် porn likes ပေမယ့်အလွယ်တကူပျင်းလာတယ်နှင့်သွားဂိမ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဆင့်မြင့်နှင့်ပိုပြီးထူးဆန်းသို့မဟုတ်လိုက်တယ်ပစ္စည်းပစ္စယလိုသည်။ ငါသည်ဤဤမျှကာလပတ်လုံးယူပြီးကြောင်းကိုမုန်း။
အားကစားပါ။ ဂိမ်းထဲမှာလိုချင်တဲ့ ဦး နှောက်ကိုလက်မလျှော့ပါနဲ့။
တစ်ခါတလေနားမလည်နိုင်တဲ့ ED ရှိတာ။ ပထမ၊ ကျွန်ုပ်၏ GFs များနှင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အပေါ်ကျဆင်းလာခြင်းနှင့်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်အားပျော်ရွှင်ကျေနပ်ခြင်းဖြင့်လျော်ကြေးပေးလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သေချာတာကဒီဟာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအစားထိုးမပေးနိူင်တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးမှာတော့မိန်းကလေးကိုငါဆုံးရှုံးသွားမှာပါ။ ငါဟာလက်ထပ်ပြီးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါဒီဟာကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၌ ED ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးပါ။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်အားကူညီပေးခဲ့သည်။ အဓိကအချက်မှာ“ ကျွန်ုပ်” သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုလုံးဝမထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအခြားစိုက်ထူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းရှိ၊ မရှိအမှန်တကယ်နှင့်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုညွှန်ပြနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်
ထိုအခါငါကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကနေအတော်လေးတွေအများကြီး dissipated နှင့်ငါ၏အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်စိတ်ဆုံးရှုံးနှင့်ပညာရေးအတွက်အချိန်အများစုကိုရရှိလာတဲ့မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဒါကသဘောပေါက်တကယ်ယေဘုယျအားဖြင့်ခဲယဉ်းသို့မဟုတ်မရတဲ့နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျှော့ချကူညီပေးသည်တဲ့လျှပ်မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်, ငါ့လိင်တံနှင့်အတူဖြစ်ပျက်မြင်က၎င်း၏အသက်ကိုပေးတော်မူ။ ကစိုက်ထူခံရဖို့လိုလားဖြစ်စေမယင်း၏စီးပွားရေးကိုသတ္တုတွင်းထက်ပိုပါတယ်။ ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့အသံပေမယ့်တကယ့်ကိုဤနည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ကျနော်အလွန်အမင်းသင့်အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးအကြံပြု ပျော့ entry ကို နှင့် karezza ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုထက်ဝေးကွာသော၊ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒါကအခြေအနေအားလုံးကိုဖိအားပေးမှုဖြစ်စေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကအစပိုင်းမှာမလုပ်နိုင်ရင်တောင်နူးညံ့နေတုန်း GF ထဲဝင်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမကြာခဏဖျော်ဖြေနိုင်တာပါ။ အဲဒါတကယ်ကောင်းပါတယ်
TL; ဒေါက်တာ: ငါ့အ ED PMO သာ 8 ရက်အကြာမှာပျောက်ကင်းအောင်ကုသသည်ကအနည်းဆုံးကဆက်ဆက်ကတူပုံရသည်!
အလေးအနက်ထား? သုံးနှစ်ကြာအားနည်းသောစိုက်ထူခြင်း၊ အတွင်း၌ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ ပြproblemsနာများပြီးခြင်း၊ သူမကျေနပ်အောင်စွမ်းရည်ကျဆင်းခြင်း၊ အနည်းနည်းလေးသောကြို့ထိုးခြင်းဖြစ်ပွားပါကပြန်လည်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသွားခြင်း။ မည်သည့်စိတ်ကူးယဉ်မည်သည့်နေရာ၌ပင်၎င်းကိုမရရှိနိုင်သည့်လတ်တလောဆဌမလ သူမကငါ့အဘို့အထွက်ပြုမူရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ် ...
ထိုအခါငါလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံး (နောက်ဆုံးညဥ့်ကဲ့သို့)7ရက် nofap (PMO အမှန်တကယ်မရှိ) ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်း? ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဟာသံမဏိပိုက်လိုပဲခက်ခဲခဲ့တယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့သူမကိုကျေနပ်ခဲ့တယ်၊ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပိုကြာနိုင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ရဲရင့်မှု (၃) နှစ်တာခိုးယူသော (ကွက်လပ်ကိုဖြည့်ပါ) tube.com ကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ပါ။
ယနေ့အဖြစ် 8 ရက်ပေါင်း! ED ကုသပေးခဲ့! ကျွန်မနှစ်သက်သောမိန်းမနှင့် P. အဘယ်သူမျှမအမ်ဒါပေမယ့်ကြီးမြတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်-အိုမရှိပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါသည် NoFap !!!!
YBOP မှမှတ်စု - သူကအသက် ၅၀ ရှိသလားလို့မေးခဲ့တယ်။ သူဟာအင်တာနက် porn မသုံးခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအမှန်တကယ်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာအတည်ပြုခဲ့တယ်။ သူ၏ ED သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဘဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ သူ၏အဖြေ
Fellas fellas fellas !!!! ဒီအစီအစဉ်နှင့်အတူကပ် !!! !!!ဘယ်သူမှငါ့ကိုထက်ပိုပြီးကုသချင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်သူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ပထမ ဦး ဆုံးအခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဆိုးရွားဆုံးသောအဖြစ်အပျက် ... ၁၀ စက္ကန့်မှ ၄၀ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူအကြောင်းကို 10% မှတိုးတက်ပါပြီ။ ငါဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြနေတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းက PMO ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအားကောင်းပြီးထိန်းထားရမယ်။ ငါရက်ပေါင်း 40 အတွင်းပြန်ပြောင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့်ငါကအသစ်တခုမိန်းကလေးအသစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိမရှိကြည့်ရှုငါ့အခွင့်အလမ်းရတယ်။ ခံနိုင်ရည်ဟာဘယ်တော့မှအရင်ကလိုမရခဲ့ဖူးဘူး။ ငါမယုံနိုင်ဘူး !!! ငါ့အစာကျွေးခြင်းပြန်ပေးခဲ့ကြသူတစ်စုံတစ် ဦး ကလာအောင်နှိုးဆွမျှော်လင့်ပါတယ် ... အားကြီးသောဖြစ်နှင့်သင်ဆုလာဘ်လိမ့်မည်။
ယခုငါသိသောအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများ၏အတင်းအဓမ္မစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြင့်စိုက်ထူခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုရပြီ! နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကပါ။ ငါထင်ထားတာကငါ့ကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင့်စေတယ်၊ ​​အဲ့ဒီ“ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်များ” ကိုပြန်ရဖို့လမ်းမရှိဘူး၊ ဒီပစ္စည်းမျိုးကကျွန်တော့်ကိုစွန့်ခွာဖို့“ ပုံမှန်” ပဲလို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုငါမှားနေပြီဆိုတာငါသိပြီ။ PMO ကျောက်တုံးမရှိပါ (ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ရှိပြီဖြစ်သည်။ )
ငါပြုပါ၏! မင်္ဂလာ! နှုတ်ဆက် YBR! နှင့်မည်သို့အောင်မြင်!
ဘယ်လောက်ကြာ pmo မပါဘဲ?
သငျသညျ ED ရှိသလော ဒါကြောင့်တိုင်းတစ်ခုတည်းလမ်းအတွက်ကုသသလဲ?
ကျန်းမာစားသုံးခြင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရေးကြီးသောအဖြစ်မှတ်ယူနေစဉ်, ဒီမည်သူမဆိုဒီစွဲလမ်းမှုကိုကုသဖို့လုံလောက်ပါတယ်အခိုင်အမာထားပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ဒါရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း
1 ။ ငါ့အတွတ် timer ကိုဖတ်ပါ။
2 ။ ဟုတ်ပါတယ်။
3 ။ ဟုတ်ကဲ့အဆီတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်နှင့်အတူအစားအစာများစားသုံးခြင်းလျှင်။ ငါကိုအောက်တွင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
၁။ ကျွန်ုပ်၏ neurotransmitter ကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်ပ stimulation သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းမလိုအပ်ပါ။ အဆီပျော်ဝင်နိုင်သည့်ဗီတာမင်များအဆက်မပြတ်စားသုံးခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်မျှတမှုရှိသည်။
2 ။ ငါနေ့တိုင်းငါ့ကျောအတွက်လှံတံကိုခိုးယူရှိသည်ကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ တစ်ဦးဂေါ်ရီလိုပဲ။
3 ။ ငါဘတ်စ်ကားပေါ်အပူထဲမှာအမြိုးသမီးမြား၏ pheromones ထံမှစိုက်ထူရ.
4 ။ ဆင်ခြင်တုံတရား။
ငါပျော်ရွှင်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်နေဖို့အစားအစာတစ်ခုလုံး၊ သစ်သီးသစ်ရွက်များနှင့်ဗီတာမင် D ဖြည့်စွက်များ မှလွဲ၍ ဘာမှမလိုတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရသည်။
ဗီတာမင် D ကိုတစ်ဦးရှေးခေတ်ရှုပ်ထွေးမော်လီကျူး script ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးတည်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ တကယ်တော့, ဗီတာမင် A, D, K နှင့်အီးအလုပ်အတူတူ, နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနကဤ lipid-based မော်လီကျူးအဘက်ဘက်မှအထောက်အကူ shared receptors မှတဆင့်ခညျြနှောငျသမြှသောအစွမ်းထက် antioxidant အာဟာရဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ သူတို့ကဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ချင်းစီကတခြားနှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အတိုင်း, အလှနျမျိုးဗီဇကိုသြဇာလွှမ်းမိုး, ကိုယ်ခံစွမ်းအား, ရောင်ရမ်း, ငါတို့အလောင်းအတွက် lipids ၏ကျန်းမာဟန်ချက်။
Retinoids (Retinol, Retinal, Retinoic Acid) သည်ဗီတာမင်အေ၏တက်ကြွသောပုံစံများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီတာမင် D အဆင့်များလုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်သည့်ကာရိုတီးနပ် (beta-carotene / alpha carotene) မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဗီတာမင် D သည်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများ (T3 / T4 / TSH) ၏ biosynthesis ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီး T4 (thyroxine) သည်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဖြစ်သည်။ carotenes ကို Retinoids သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောအင်ဇိုင်းများကိုလှုံ့ဆော်သည်။ အောက်ပါသုတေသနပြုချက်များအရဗီတာမင်အေဖြည့်စွက်ဆေးများကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ ကျနော်တို့အရွက်အစိမ်းရောင်ကိုစားပြီးနေရောင်ခြည်ရဖို့လိုတယ်။
- ထို့အပြင်၊ အာရုံခံဆဲလ်များ၌ RA (Retinoic Acid) တွင် tyrosine hydroxylase နှင့် dopaminebhydroxylase (dopamine synthesize the enzymes) နှင့် dopamine D2 receptor တို့၏ဖော်ပြမှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းညှိသည်။
- retinoid receptor နောက်ကောက်ကြွက်များတွင် locomotor လိုငွေပြမှုလျော့နည်း dopamine D2 အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့်အတူလိုက်ပါကြောင်းထင်ရှား၏။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဦး နှောက်တွင် retinoid အချက်ပြမှု၏အခန်းကဏ္ - - https://web.archive.org/web/20170810021830/http://www.roaccutaneaction.com/Studies/2005.Lane.pdf
Retinoid X Receptor ကိုဖွင့်ခြင်းသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်မော်ဒယ်များတွင် dopamine cell ရှင်သန်မှုကိုတိုးစေသည်
ဗီတာမင် A / D သည် dopamine receptors များကိုသာဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ Serotonin နှင့်အခြား neurotransmitter receptors များကိုဗီတာမင်အေဖြင့်ဖော်ပြသည်။
13-CIS-Retinoic acid ကို 5-HT1A အဲဒီ receptor တိုးပွါးနှင့်စသည်တို့အတွက် serotonin reuptake Transporter အဆင့်ဆင့်, intracellular serotonin ပွောငျးလဲ။
အဆီတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်ချို့တဲ့ကလေးငယ်များသည်ဤဗီတာမင်ဓာတ်ချို့တဲ့နှင့်အတူမွေးဖွားဖြစ်ကြောင်းမိခင်များအတွက်ကပ်ရောဂါဒါဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်ဗီတာမင်ကေကလေးသူငယ်များပညတ်တရားအားဖြင့်ကလေးမွေးဖွားမှာဗီတာမင် K သည်ရိုက်ချက်များပေးထားခံရဖို့ရှိသည်!
အင်တာနက်အပေါ်သုတေသနတွေအများကြီးမှာ google အပေါ်ရိုးရှင်းသောသော့ချက်စာလုံးများကို အသုံးပြု. , သတင်းအချက်အလက်အများကြီးအဆီတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်အားဖြင့် neurotransmitter receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ. ရရှိနိုင်ပါသည်ရှိပါသည်။
Soooo ကျေနပ် !!
ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြာအောင်ပြန်ဖွင့်ပြီ မနေ့ကငါထွက်သွားပြီးသိတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ အခြေအနေကနည်းနည်းလေးပူပြီးလေးလံလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်။ ဖြစ်ကောင်းခဲ့အကြောင်းကို 60 သို့မဟုတ် 50% ခဲယဉ်းသည်။
reboot မလုပ်ခင်ငါ SAME မိန်းကလေးနဲ့သူမတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး SAME ပစ္စည်းကိုသူမနဲ့လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အောက်ထပ်မှာလုံးဝတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ rebooting စေတဲ့တိုးတက်မှုကိုတွေ့ပြီ။ ယခုငါသေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီရက် (၆၀) အလိုတွင်၎င်းကိုစွန့်ခွာခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးပါ။
အကြှနျုပျ၏ reboot လျင်မြန်စွာတိုးတက်သည်ငါ့ PIED ကိုအမှန်တကယ်ပြင်းထန်ဘယ်တော့မှခဲ့ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းတစ်ညတစ်ကြိမ် PMO'd ပေမယ့်မူးရူးခဲ့ဘူး။ သို့သော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သို့မဟုတ်သင့် reboot ဖြစ်စဉ်များနှေးကွေးအဲဒီမှာအတွက်ဆွဲထားခြင်းနှင့်သွားစောင့်ရှောက်လော့။ ဒါဟာအလုပ်ကိုပါဘူး။ သင်ယခုမယုံနိုင်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်က၎င်းအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ငါကဲ့သို့သောအရူး shit ထင်သော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏လျင်မြန်သောတိုးတက်မှုသည်ဤသို့ဖြစ်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် - ပြန်လည်မသက်ရောက်ခြင်းနှင့်လိင်နှင့်မဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်နေ့စဉ်အလုပ်များနေခြင်း။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကုသနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်ပေးဖို့မင်းကိုပေးမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်
ငါတို့ဒီမှာ။ 90 နေ့ရက်များ။
ဒီနေ့မနက် ၉၀ ထိရောက်တယ် လောလောဆယ်မနက် ၉း၁၂ တွင်ကျွန်ုပ်သည်မိုးရေ၊ စားသောက်ပြီးပြီ၊ နေ့လည်စာစားပြီးလျှင်ည ၁၀း၀၀ တွင်စတင်ရန်နေ့အတွက်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်ပြီးပြီ။
၂၂ ရက်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက် NoFap မှာကျွန်တော်တစ်ခါမှမအောင်မြင်ဘူး။ ဒါကကျွန်မရဲ့ဒုတိယကြိုးပမ်းမှုပါ။ ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထပ်တလဲလဲမြင်နေရတာမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး
ငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေဆဲ၊ ငါမှတ်မိသောနောက်ဆုံးကြီးကျယ်သောနေ့မှာ ၈၄ တွင်ငါလွှတ်ပေးရန်ပုံစံကိုအလွန်အမင်းမျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်းထိုအခြေအနေမျိုးတွင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်မှာသင်၏ကွန်ပျူတာကိုထပြီးထွက်ခွာရန်ဖြစ်သည်။ သွားပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုစကားပြောပါ၊ သင်တွန်းအားမကုန်မချင်းသင် fap မလုပ်နိုင်သည့်အခြေအနေမျိုး၌သင့်ကိုယ်သင်ထားပါ။ လမ်းလျှောက်ဖို့သွားပါ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငါယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးယုံကြည်မှုပါပဲ။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် (အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးငယ်များ) ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသားအရေနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းရှိသော်လည်းအမှားများကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်သည်လူတို့ကိုစော်ကားခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခြင်းများကိုစိတ်ထဲမထားပါ။
ငါ NoFap မစတင်မီတစ်နှစ်ကြာခြောက်သွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါရည်းစားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားကတည်းကငါမှာလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်၊ အဲဒီမှာငါ ED ပဲ၊ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ ED ။ ဒါသဘာဝပါပဲ။ ငါစိတ်ထဲသူမကိုအပြစ်တင်မိသည့်အချိန်တွင်လုံးဝမှားသည်မဟုတ်၊ သူသည်လှပပြီး sexy ဖြစ်၍ ယခုငါမြင်သည်။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ငါကရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်ထက်ကနောက်ဆုံး3လအတွင်းပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါပြီ။ ED တော့ဘူးပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
ငါပြောတာက NoFap ကမင်းကိုလူတစ်ယောက်အဖြစ်မပြောင်းလဲဘူးလို့ထင်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်၏ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ လူတိုင်းကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာပါ။
LINK - အောင်မြင်မှု။
3 နှစ်ပေါင်းအဘို့, ကိုယ့်တာရှည်တဲ့ဆကျဆံရေး gf နှင့်အတူဖြစ်ချင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ သူမကကျွန်မကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ သူမဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ကတင့်တယ်တယ်၊ လွန်ခဲ့သော2ပတ်ကဤ subreddit ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၂ ရက် (၁၃ နီးပါး) ကျွန်ုပ်သည်ဤ ၃ လစိန်ခေါ်မှုကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပထမရက်သတ္တပတ်သည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိပ်မက်ဆိုးများ၊ အနားစောင်များ၊ တိုက်တွန်းချက်များ၊ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ဒုတိယပတ်မှာမင်းကယောက်ျားလေးတွေရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၊ ပြေးတာ၊ အလုပ်များနေတာလား၊
ယနေ့ ၁၂ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ gf နှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးtoုံစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုယ့်အထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့အခါငါငိုလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့ဒါကအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသက်သေပြပါ။ ငါဟာအရင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး fap လုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ငါတိုက်တွန်းထပ်မံပေါ်ပေါက်သည့်ရက်ပေါင်းရှိလိမ့်မည်ကိုသိပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ငါလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျိုးနပ်သည်ထက်ငါသိ၏။ ခိုင်မာတဲ့ Fapstronauts, ငါအခြားပို့စ်များကိုတူသောအသံသိပေမယ့်ကိုယ့်ယောက်ျားတွေ, ဒီအကျင့်ကိုကျင့်သင်တို့ကိုငါအာမခံနိုင်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ 29th ကတည်းကအဘယ်သူမျှမ PMO (posted: 1 / 10 / 13)
ငါ 90 NoFap Streak အပေါ်သွား၏။ (reddit မဖျက်ခင်၊ ကျွန်တော့်နာမည် CaptainClearDay၊ reddit အချိန်အများကြီးကုန်နေတယ်) သို့သော်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာပြီးနောက်ငါ "relapse" လုပ်ခဲ့သည်။ NoFap နဲ့ကျွန်မရဲ့အကြီးမားဆုံးအရာကတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၊ ငါသည်အနည်းဆုံးတစ်ခြားသောနေ့ရက်တိုင်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအိပ်ယာမဝင်မီတစ်ညလုံးအိပ်မောကျနေခဲ့သည်။
ငါလှုံ့ဆော်မှု, porn အတွက်သို့မဟုတ်ဘာမှမပါဘဲ FAP မှရွေးချယ်သောကြောင့်, ငါ့ "relapse" ငါကိုးကားအတွက်ပြောပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာငါမိန်းမတွေတောင်မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။
အဲဒီလိုပြောတာနဲ့ ၄ လနီးပါးကြာပြီးတဲ့နောက်မှာငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ porn ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်မမြင်သောအခါ…နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်မယုံနိုင်လောက်အောင် FAP တိုက်တွန်းချက်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းခံရသည် - ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်တွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့ရခြင်းသည်သင်၏စိတ်ကိုအမြဲလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်၊ သင့်တုံ့ပြန်မှုကိုသာပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ NoFap ပြီးနောက်။ [မိန်းမအကြောင်းအသေးစိတ်မပြောတတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ခလုတ်နှိပ်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ ]
ငါဒီနေ့အတူတူရုပ်ပုံလွှာကိုမြင်တဲ့အခါ ငါထွက်သွားနှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တိုက်တွန်းပါတယ်။ သငျသညျသူမ၏ကိုလိုက်ချင်, သင်အရာအားလုံးလုပ်ချင်တယ် .... FAP မှလွဲ။ ။
အဆိုပါခြားနားချက်ကြောင်းရိုးရှင်းပါသည်။ ထိုအ BTW, ငါ့ Porn သွေးဆောင် ED ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ non-တည်ရှိသောသူဖြစ်ပါတယ်။
NoFap အကြောင်းကျွန်တော်သိလိုက်ရတာဘယ်လောက်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ကျွန်တော်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်ဆုံးညဥ့်ငါနောက်ဆုံးမှာငါထင်ခဲ့ရာလုပ်ခဲ့တယ်ငါ့ရဲရင့်ပြန်လည်။
လွန်ခဲ့သော ၄ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်၏ရှည်လျားသောရည်းစားနှင့်ခွဲခွာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အတူတူ 6-7 နှစ်ကြာအတူတကွခဲ့ကြသည်, စိတ်ထဲမှာ im 23 yo သတိရပါ။ အဲ့ဒီအချိန်တစ်လျှောက်လုံးငါ PMO ကိုသုံးဖူးသော်လည်းသူမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဖူးဘူး။ ငါနှင့်ပတ်သက်သောအချက်မှာ၊ ဤသို့သောရှည်လျားသောဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြိမ်အနည်းငယ်ကွဲလွဲခဲ့ကြပြီးထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုဖြစ်စဉ်အားလုံးနီးပါးလုံးနီးပါးအဆုံးသတ်သွားနိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်အမြဲကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ၀ မ်းနည်းမှုများစွာ (သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားချက်များဖြစ်သည့်အရာများထဲမှ) အနေဖြင့်သူမကိုပြန်မောင်းထုတ်သည်ဆိုပါစို့။ ငါရရှိသောအခွင့်အလမ်းတိုင်းကိုကျွန်ုပ်၏ Mojo ပြန်ယူခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးသည်။ PMO ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုမယုံကြည်နိုင်တော့ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်ပြိုကွဲခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့အဲဒါဟာခေတ္တယာယီသက်သက်မျှမဟုတ်ဟုခံစားမိနိုင်သည်။ ငါသူမထံမှဝှက်ထားသောသိထားသည့်အချက်အလက်များအရဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်သူမကိုအပြစ်မတင်ပါ။ မည်သူမဆိုဖြစ်ကောင်းမသေချာမရေရာမှု၏အရေအတွက်နှင့်အတူတူပင်ပြုပါလိမ့်မယ်, ငါ့ PMO အပေါ်ငါ့လုပ်ရပ်များအပြစ်တင် (သူမအစဉ်အဆက်အကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါ, ငါမျှဝေရန်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ) ရုံ bullshit ဖြစ်ပါသည်, ငါ့လုပ်ရပ်များပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မပေးပါဘူး။
အားလုံးခြုံပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားပြီးနောက်အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ (ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတင်ထားတဲ့ပုံလိုပဲ) ပိုဆိုးတာကလူတိုင်းလိုပဲအချိန်ကုန်လွန်လာရင်ငါလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူတွေကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အထိပိုအစွန်းရောက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။ ဒါကကျွန်မကိုလိင်တူချစ်သူဖြစ်မယ်ထင်စေပြီးအမျိုးသမီးပုံစံကိုအမြဲတမ်းချစ်မြတ်နိုးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ထိတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကရွံစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ပဲ။
PMO ကိုတစ်ချိန်လုံးရပ်တန့်ရန်အချိန်တန်ပြီဟုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ငါ့မှာဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူး၊ အလုပ်ဖြစ်လား၊ ပြီးတော့ခန့်မှန်းကြည့်ပါ၊ ငါ ၂၂ ရက်သာလမ်းလျှောက်ရပြီးနောက်ဆုံးညတွင်ငါကြိုက်ခဲ့သောမိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ gf ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏နေရာတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်သည် (လက်ရှိ Streak ၏ ၄ ရက်ခန့်အကြောင်းကို) ပြိုကွဲခဲ့ပြီးထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ သူမသည်ထိုစဉ်ကနားလည်မှုအလွန်ရှိခဲ့ပြီးစိတ်ဓာတ်မကျဘဲမနေ့ကကျွန်ုပ်နေရာသို့ပြန်လာသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါကွန်ဒုံးမပါပဲလုပ်ခဲ့တာတောင်ငါအလုပ်ပြုတ်သွားမှာကိုငါကြောက်ခဲ့တယ်။ မနက်ခင်းမှာငါတို့ဒုတိယအကြိမ်လုပ်တာကသွားဖုံးနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့လူလိုငါခံစားရတယ်။ နောက်တဖန်
ယောက်ျားတွေ, ဒီ shit fuck ဆိုတဲ့, PMO ကြဘူး။ ငါ၏အ post ကို၌ငါလှုံ့ဆျောပေးရနျကြှနျုပျတို့၏ကွောကျရှံ့သောပြproblemနာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေမယ့် PMO ရပ်တန့်ကတည်းကငါပိုကောင်းခံစားရသောအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်၏တစ်နေ့တာတာ ၀ န်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သင်အားလုံးသည်သင်၏ယုံကြည်မှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးပွားစေသည်။ PMO သည်သင်၏အသက်တာမှရွှင်လန်းမှုကိုယူဆောင်ပေးပြီးအချို့သောလေးနက်သောကိစ္စရပ်များတွင်၎င်းသည်သင်၏အသက်တာကိုပင်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ အဲဒါကိုခွင့်မပြုပါနဲ့
im ဂုဏ်နဒီလမ်းကြောင်းကိုဆင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်သမျှသောလမ်းကိုသွားပါ။ အဆိုပါရမ္မက်နေဆဲလာပေမယ့် PMO ပြီးနောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဘို့အသနား၏ခံစားချက်များ၏နှိုင်းယှဉ်နှင့်နောက်တစ်ဦးစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပြုံးမိန်းကလေးမှနှိုးထလာ၏ခံစားချက်ရုံပျေါမှာထင်ဟပ်မဆိုလိုအပ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်ကြဘူး။
tl; ဒေါက်တာသည်မတူညီသောအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အဆင်ပြေသောတစ်ခုတည်းမှစွန့်ပစ်ခြင်းခံရသည်၊ အစတွင်အလွန်အံ့အားသင့်သွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်အတူတကွစုရုံးခဲ့ပြီး ၂၂ ရက်၌သာပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်ခဲ့သည်။
ဝိုး! ရက်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ငါနေ့ 50 ရက်မှာထင်! ဒီနေရာမှာငါအစီအစဉ်ကိုမှီဝဲပုံပါပဲ။
မင်္ဂလာပါ Fapstronauts! ငါကလူအများစုရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖတ်တတ်တယ်၊ အကြံဥာဏ်နှင့်ပြန်လာသော။
ငါမစတင်မှီငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်အစမှာတစ်ကြိမ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိ၏နှင့်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး (သူမငါ့အဘို့အလွန်ခံစားချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရသူလှပသောမိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့သည်) ငါရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါပါပဲ။ နောက်ဆုံးတွင်အခြေအနေတစ်ခုလုံးအဆုံးသတ်သွားသည် (ပျက်ကွက်သည့်စိုက်ထူခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ) သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချိန်တစ်လခွဲခန့်ရပ်နားခဲ့သည်။ ထိုအချက်ပြီးနောက်ငါ "ech ... စဉ်းစားမိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်"
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ပစ္စုပ္ပန်ပေါ်သို့ငါအောက်တိုဘာလရဲ့အဆုံးမှာအသစ်တခုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမအကြှနျုပျအဘို့မည်သူမဆိုသိတယ်လျှင်ငါသူ့ကိုမေးပြီးမှဒါဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆွေတစ်နေဖြင့်ဖွင့်လှစ်မယ့်မျက်စိကန်းသောရက်စွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲနောက်မှငါတောင်မှတစ်စက္ကန့်နေ့စွဲထက်ပိုရှိပါလိမ့်မယ်သိတယ်။ ကျနော်တို့ရက်စွဲများအပေါ်သွားလေ၏အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်လာတယ်။ ငါ၏အဘောင်းဘီထဲမှာသူမ၏လက်နှင့်အတူကျွန်မအကြောင်းကို 75% စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။ ငါမသွားအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားမိတယ်။ အချိန်ပေါ်တွင်ကွန်ဒုံးထားရန်လာခဲ့သည်။ WOMP WOMP ။ လုံးဝအားလျော့။
ငါရှက်ခဲ့မိတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ငါတို့ကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါငါတို့နှစ်ယောက်လုံးသူငယ်ချင်းပါတီပွဲမှာအရက်မူးနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကဒါကိုအပြစ်တင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ပြknewနာကိုသိပြီး PornFree နဲ့ NoFap တို့အတွက်အချိန်တန်ပြီလို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ။
နောက်တစ်ခါကျွန်မတို့စုဝေးကြတဲ့အခါငါလုပ်ခဲ့သမျှအခက်ခဲဆုံးအရာတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအကြောင်းကိုသူမကိုပြောပြခဲ့သည် ငါလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ အဲဒါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတာနဲ့မဝေးတော့တဲ့နဲ့ဝေးကွာတဲ့အနာဂတ်မှာဘာတွေကိုမျှော်လင့်ရမယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ သူမသည်အလွန်အမင်းနားလည်မှုရှိသူဖြစ်ပြီးသူမသည်ယခင်ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသောကြောင့်သူမသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်သူမဂရုမစိုက်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်၏“ မှော်လက်” များသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လည်းတိုးတက်လာတယ်။ ၃ ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာထိုးဖောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကွန်ဒုံးနဲ့စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာမဆိုနည်းလမ်းအားဖြင့်အကြီးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်တစ် ဦး ခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်စဉ်ကိုအလုပ်လုပ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤတနင်္ဂနွေသို့အစာရှောင်ခြင်း (၄၅ ရက်အမှတ်အသားအတိတ်တွင်) ။ ပြီးတော့ငါတို့လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်အားနည်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်အထူးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာသုံးကြိမ်လောက်လိင်မှုကိစ္စလေးကြိမ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သူမကွန်ဒုံးကို ၀ တ်ပြီးတဲ့နောက်သူမငါ့ကို“ နှိပ်နယ်ခြင်း” လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမလက်ချောင်းတွေရဲ့နူးညံ့တဲ့ထိတွေ့မှုကိုမှပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ခေါင်းကိုအနှိပ် လိင်ဆက်ဆံမှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းကုသပေးသည့်ယောကျာ်းလေးများအပြင်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လိင်အရပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်ကြောင့်ဖြစ်သည်)
အဓိကအချက်မှာသင်၏ပြproblemနာကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းအားဖြင့်၎င်းအားပွင့်လင်းစွာပြောဆိုခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ သင်၏ပြproblemနာကိုအခြားသူများအားကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောပြသောအခါ၎င်းသည်မည်မျှမိုက်မဲကြောင်းသင်သဘောပေါက်စေသည်။ “ ပြofနာမဟုတ်တဲ့” အမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ သေချာတာကငါဟာ“ FAP DUH” မဟုတ်ဟုပြောဖို့လွယ်ကူတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းမှာသူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်၎င်းအကြောင်းကိုအငြင်းပွားဖွယ်စကားပြောခဲ့ဖူးသည်၊ သူသည်သူ၏ယောကျ်ားဘဝလည်ပတ်ပုံနှင့်သူတစ်ခါတစ်ရံသူမပျော်ပုံကိုစတင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုပြောတာက“ လူကိုမကွည့်နဲ့၊
ဒါဟာတာရှည်လေနှင့် directionless ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အောက်ခြေလိုင်းငါသင်သည်သင်၏ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဂရုစိုက်အခြားသူများအားတက်ဖွင့်လှစ်မယ့်ကြီးမားတဲ့အကူအညီနှငျ့ relapsing ဘယ်တော့မှအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီတော့ ... ED နှင့် DE ပုံပျောက်သွားပြီ
မနေ့က ၂၃၀ ~ ရက်အတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး PIV လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရတယ်။ ငါ fapstronaut စွန့်စားမှုမတိုင်မီ ED နှင့် DE နှင့်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ ယခုငါပျောက်ပြီပုံရသည်။
သေချာတာကတော့ fapping ကိုပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ အရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့၊ နက်ရှိုင်းတဲ့၊ ပိုမိုပြင်းထန်လာတဲ့၊ ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံမှုတွေအများကြီးရှိတယ် (မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကွဲပြားပေမယ့် nofap = D အပေါ်အပြစ်တင်ဆဲပါ) ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစက္ကန့် ၅၀ သာလုပ်သည်၊ သို့သော်တစ်နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များ မှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုမရှိတော့ပါ။
ဒါကြောင့် ... ကြောင်းအဘို့အသတိထား; ရှည်လျားသော nofap session ပြီးနောက်ပြီးနောက်အနည်းငယ် Sprint ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဘယ်သူမျှမ Fap ၏ရက် 30+, ငါ့ပုံပြင် ...
သူချင်း Fapstronauts နှင့်နှုတ်ဆက်သည် !!! ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရက်ပေါင်း ၃၀ ကိုစစ်ဆေး။ ကျွန်ုပ်အောင်မြင်ခဲ့ပုံအကြောင်းပြောပြရန်ဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ငါ NoFap ခရီးကိုတစ်ညအိပ်ပြီး ၆ နာရီလောက်ကြာမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါတုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတစ်ညလုံးချောင်းဆိုးနေသဖြင့်အိပ်မပျော်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပြည့်နေသောကော်မာထဲမှနိုးလာသောအခါကျွန်ုပ်ခံစားနေရခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါ။ ငါအရှုံးသမားနဲ့တူသလိုခံစားရတယ် ကျွန်ုပ်၏လုပ်ရပ်များသည်ကျွန်ုပ်သိနိုင်သောသူနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ငါကအရပ်ရှည်တယ်၊ တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတယ်၊ အားကစားတယ်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ် ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ အကြိုက်ဆုံးအချိန်သည် fap ဖြစ်သည်။
ငါ၌ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ED ပြissuesနာများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၎င်းသည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဟုအမြဲထင်ခဲ့သည်။ ငါ Viagra / cialis ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်တာကာလက (တစ်ခါတစ်ရံမှာတောင်မှအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး) ငါ ED ဆေးပြားသောက်နေတဲ့ငယ်ရွယ်တာဟာထူးဆန်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ (ငါအသက် ၃၂ ​​နှစ်မှာ) fapping ကိုရပ်တန့်စေချင်တဲ့အရာကိုပြန်သွားပါ။ ငါခံစားခဲ့ရတာကတကယ့်ကိုနိမ့်ကျတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲ။ ပြီးတော့ငါဟာငါ့ဘ ၀ နဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအကြောင်းစဉ်းစားပြီး PMO ကဒီအရာအားလုံးကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့တယ်။
ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် porn အတွက်ကောင်းသောအရာကိုစွန့်လွှတ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ငါ "porn ဘယ်လိုအရှုံးမပေးဖို့ဘယ်လို" googled နှင့် YBOP တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုတွေအများကြီးဖတ်ပြီးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော့်မှာ Ahh Haa !!! ကြီးရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုများစွာနားလည်ခဲ့တယ်။ TEDx ဟောပြောချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်။ ဤတွင်ပြီးခဲ့သည့်လ၏အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့ရက်များ 1-7: ငါဆဲတုပ်ကွေးကနေပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်သော်လည်းကမ္ဘာကြီးကိုအပေါ်ထိပ်ပေါ်မှာခံစားရတယ်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအများကြီးလိုအပ်ကြွင်းသောအရာရနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာရတဲ့အပျေါမှာငါ့အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်။
နေ့ရက်များ 7-14: နေဆဲတော်တော်လေးကောင်းသောခံစားခဲ့သည်။ ငါကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေကိုစတင်ခဲ့ပြီးငါနေမကောင်းဖြစ်ခြင်းမှစီးရီးလက်လွတ်မသွားခဲ့ပါကအားကစားရုံသို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအစပျိုးမှုများကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်၏ Face Book, Twitter နှင့် Instagram အကောင့်များကိုဆိုင်းငံ့လိုက်သည်။ ငါခက်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖေ့စ်ဘွတ်ကညစ်ညမ်းတဲ့အပြင်ငါ့ရဲ့အခြားအပြစ်လည်းဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါတောင်မှမလွတ်ဘူး။ ငါသည်လည်း flatline မှစတင်ခဲ့သည်။
နေ့ ၁၄-၂၁ ရက် - ကျွန်ုပ်ဘဝမှအရာများသည်ပုံမှန်ပုံရသည်။ အကြောင်းရင်းအချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အသက်တာတွင်အဝတ်ဟောင်းများ၊ ဖိနပ်များ၊ စာအုပ်များစသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အသုံးမပြုခဲ့သောအရာများစွာကိုဖယ်ရှားရန်ဤတိုက်တွန်းချက်ကိုခံခဲ့ရသည် ဒီနေရာမှာ (Reddit) ။ ငါဇုန်အတွက် 14 နာရီဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂ ပတ်ကြာအောင်လုပ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်မည်မျှကွဲပြားကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် RES ကိုမည်သို့ install လုပ်သည်ကိုသတိပြုမိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းမပြုပဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
နေ့ရက်များ ၂၁-၂၈ ရက်။ ငါဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေခံစားရတယ်လာတယ်။ ငါအိပ်ပျော်သွားတယ်၊ အမြဲတမ်းပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ကျွန်မရဲ့အစာစားချင်စိတ်ဟာဝေးလံတယ်၊ ပျော်ရွှင်၊ ဒေါသ၊ ဝမ်းနည်းနေ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်တိုစရာကနေကွဲပြားတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်။ ငါသည်လည်းတက်ကြွစွာဆီးအိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမိနစ် 21 တိုင်းရက်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက် piss ယူပြီး, ဒါကတကယ်စို့။ ငါဆရာ ၀ န် (ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု) ကိုသွားတော့သူကမဆိုးဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ရဲ့ဆီးကြိတ်အရည်မှာကူးစက်မှုနည်းတယ်၊ ဒါကြောင့်သူကငါ့ကိုပantibိဇီဝဆေးတွေသွင်းခဲ့တယ်။ ဆဲအရူးခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက်တွေရှိခြင်းနှင့်ငါ PMO'd ရှိရာတ ဦး တည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
နေ့ရက်များ 28-30: နေဆဲအတူတူပင်အချို့ရှေ့တော်၌ထိုရက်သတ္တပတ်အဖြစ်ပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုကောင်းလာပြီ။
နေ့ ၃၁ ရက်။ ။ ပြီးတော့ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာလာ။ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ Viagra သောက်တဲ့သောက်ဆေးထဲကတစ်ဆင့်ကိုယူလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါပြန်ရှာမယ်၊ အဲဒါကိုငါလိုအပ်မယ်လို့မထင်ဘူး။ ငါသည်လည်းငြိမ်းချမ်းသောညအနားယူခဲ့သည်။ ဒီနေ့ရာသီဥတုသာယာလိုက်တာ။
အဘယ်အရာကိုကူညီပေး: လူမှုမီဒီယာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ပဲ။ အောင်မြင်မှုပုံပြင်များနှင့်ဆုတ်ယုတ်မှုဖတ်နေ NoFap နှင့် Pornfree တွင်စစ်ဆေးခြင်း (NoFap နှင့် Pornfree မှလွဲ. ) ။ ဘာဝနာ။ ကြွင်းသောအရာ (ငါကလူအများကြီးလေ့ကျင့်ခန်းလို့ပြောပေမယ့်ငါပြီးသားအပြင်းအထန်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလုပ်ပေးသိကြ) ငါ၏အခွေးနှင့်အတူကစားခြင်း။ မစ္စတာ Nice ကောင်လေးအဘယ်သူမျှမကပိုဖတ်ခြင်းနှင့်သင်ကချည်နှောင်ဒါကကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကုစားခြင်း။ (Highly အကြံပြု) ဤ၌ရှိသမျှသောအကြောင်းကိုငါတတျနိုငျသသလောက်လေ့လာသင်ယူ။
ငါ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီးငါ 60 နေ့ရက်ကာလ၌တစ်ပင်ပိုကောင်းဇာတ်လမ်းရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတူဒီလုပျနိုငျ !!!
TLDR ငါကငြီးငွေ့တယ်အကြောင်းကို 25 နှစ်ပေါင်း fapped YBOP, NoFap နှင့် PornFree တွေ့ရှိခဲ့, ဒီ 30 တစ်ရက်ကာလအတွင်းအနည်းငယ် ups ကျခဲ့ပေမယ့်နေဆဲစွာတည်လေ၏။ ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်အဘယျသို့စာရင်းနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အတူတူဒီလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ PIED ပိုကောင်းဖြစ်လာ
တစ်ခါတလေစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာမနေနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲပြီးအမြဲနူးညံ့ပျော့ပျောင်းနေတတ်တယ်။ အခုတော့ NoPorn မှာ ၅၆ ရက်ရှိခဲ့ပြီး (အသေးအမွှားကျူးလွန်မှုအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ပေမယ့်ဒီအချိန်ကာလအတွင်းညစ်ညမ်းမှုကိုမကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး) နှင့် ၆၁ ရက် NoFap တွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်အတော်အတန်ခက်ခဲပြီးကျွန်ုပ်အားလှည့်စေသောအရာတစ်ခုခုကိုဆက်လက်တွေးတောနေသရွေ့ကြာရှည်စွာမနေမနေတည်ရှိနေသည်ကိုမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သတိပြုမိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအတွေးများသည်ယခုအချိန်တွင်မခက်ခဲသော်လည်းအချို့သောအတိုင်းအတာအထိရှိနေသေးသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြproblemနာကတော့ကျွန်ုပ်မှာ Erectile အရှည်ကိုအပြည့်အ ၀ ရောက်တဲ့ပြissuesနာတွေရှိနေတယ်။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်ငါ၏အအပြည့်အဝ၏ထက်ဝက်သို့မဟုတ် 2/3 သာရ။ ငါဘယ်လိုပြင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်စိုက်ထူနိုင်ခြင်းအတွက်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ပြားချပ်ချပ်၏တကယ့်လက္ခဏာမပြသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်ပြissuesနာအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချက်အလတ်တစ်ခုတွင် Flatline တွင်ရှိနိုင်သည်ဟုထင်စေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်မှားကြောင်းသက်သေပြရန်မကြာမီက
ဒီမှာမေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်။ သူတို့စိုက်ထူအရည်အသွေးနှင့်အတူကူညီသလား သူတို့ကိုအကြိမ်အနည်းငယ် (စက္ကန့် ၃၀ x ၁၀) အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီဘူးလားမသေချာဘူး။ သူတို့ကိုငါလုပ်နေတုန်းစိုက်ထူခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါသာမန်အားဖြင့်ပျော့ပျောင်းသွားတယ်။
ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုစိတ်အားမျှော်လင့်ပါတယ် / သင်သည်ယောက်ျားတွေအချို့ကူညီပေးသည်
၂၅ နှစ် ငါ ၁၁ နှစ်ကတည်းက PMOing ဖြစ်ခဲ့တာငါစကတည်းကတစ်နေ့သုံးကြိမ်လောက်။ သူတောင်းစားပြီးကတည်းကအလွန်စွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့ကြသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည် PE နှင့် ED နှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့မိန်းမကြီးတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုရှောင်ရှားစေခဲ့တယ်။ ငါအမျိုးသမီးတွေဝိုင်းရံပိတ်ဆို့နှင့်ငါအိမ်ပြန်လျှင်ငါအမြဲတမ်းအလုပ်အကိုင်အရဖို့ palmala ဟောင်းအပေါ်မှီခိုနိုင်ကြောင်းသိလိမ့်မယ် ငါထင်တာကဒါကထူးဆန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမြဲသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအတွက်တော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာတော့တကယ်မပေးခဲ့ပါဘူး
လွန်ခဲ့သောစုံတွဲတစ်တွဲမှရှေ့ဆက်အစာရှောင်။ ငါသိကျွမ်းပြီး ၉ လခန့်မိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်ခဲ့ဖူးသောမိန်းကလေးတစ် ဦး သည်သူမနှင့်သူမဆက်ဆံရေးပျက်ပြားသွားသည်။ ငါတို့တွေဟာစတင်ထွက်ခွာလာကြပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမှန်တကယ်ခံစားချက်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအတူတကွပေါင်းသင်းပြီးနောက်သူမသည်အရာရာကိုပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာစေရန်လိုသည်။ ငါမှာဒီ PE / ED ပြproblemနာရှိတယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ သူမနဲ့ဖြစ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သူမသည်ကျွန်ုပ်ထက်လိင်မှုကိစ္စအတွေ့အကြုံပိုများပြီးသူမလိုချင်သောအရာကိုသိရှိကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားပါ။ ဒီဟာကိုမထချင်ပါဘူး တစ်လလောက်လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားနေတာငါစက္ကန့် ၂၀ ကျော်လောက်စိုက်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသည်။
PE အကြောင်းအဆုံးမဲ့ဖိုရမ်များနှင့်ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ဤအရာကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်း မရှိ၍ ရှာဖွေပြီးနောက် TED ဟောပြောချက်အပေါ်ကျွန်ုပ်မှားမိသည်။ သန့်ရှင်းသော SHIT !!!! ဒါကငါ့ပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ် ငါ porning နှင့်ငါ၏ gurkin တစ် ဦး မေ့မြောထဲသို့ jerkin ခဲ့ကြရတယ်။ ပြီးတော့ဒါကိုရည်ညွှန်းတဲ့ subreddit တစ်ခုရှိတယ်။ ငါဝင်မယ် !!!
နာရီနှင့်အင်တာနက်သုတေသနအကြာင်း။ ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးအားကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ် NoFap အကြောင်းပြောပြသည်။ သူမသည်သံသယဖြစ်သော်လည်းထိခိုက်နာကျင်မှုမရှိကြောင်းသိသည်။2ပတ်ကုန်သွားပြီးငါ3ကြိမ်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ED ကြောင့်မိန်းကလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံနေတုန်းပဲ။ မိန်းကလေးကစိတ်ရှုပ်နေပြီးငါတို့ဟာသူငယ်ချင်းဖြစ်သင့်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ် (သူမသူမကိုမသိစိတ်နဲ့အာရုံမစိုက်မိဘဲသူ့ကိုယ်သူကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ထင်တယ်)
ထိုသို့ OK ကို။ THE fuck ဆိုတဲ့ UP Man ဖို့အချိန်။ အဘယ်သူမျှမကပို relapsing သင်၏အသက်တာကိုထိန်းချုပ်ယူပါ။ ငါ (ကျနော်မျှော်လင့်ချက်) သူမကဒီထဲကအကပ်လျက်လျှင်အလုပ်မလုပ်လိမ့်မည်ဟုသူမအလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။ ငါပြန်ရောက်သွားတယ်ကြောင့်နောက်တဖန်အဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်သူမ၏ပြောပြပါ။ PMO ယှဉျ၏6ရက်ပေါင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကဖြစ်ပျက် !!! fucking ကောင်းကင်တမန်များဆင်း လာ. နှင့်အဟောင်းစစ်သားကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကဲ့သို့ဒါဟာခံစားရတယ်။
အဲဒီနေ့က ၁၀ ရက်ရှိပြီ။ ငါတို့ကနေ့တိုင်းနီးပါးလိင်ဆက်ဆံတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်။ ED တစ်ချိန်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ ငါ ၁၀၀% ပျောက်တယ်လို့ငါမပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်ကစတင်ခဲ့တယ် 10x ပိုကောင်းတယ်။
fapping မရှိဘဲဖြတ်သန်းသောနေ့ရက်သည်ကောင်းသောနေ့ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၆ ရက်နေပြီး ၉၀ တွင်ကျွန်ုပ်ခံစားရပုံကိုမစောင့်နိုင်ပါ။
နှလုံးသားစိတ်ခံစားမှုဖော်ပြချက် - NoFap ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကငါ့အတွက်ဘယ်လောက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုငါမပြောနိုင်ဘူး။ မင်းတို့အားလုံးဟာလူတွေရဲ့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲဖို့တကယ်ပဲကူညီပေးနေတယ်။ တစ်ချိန်ကလိင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကြောက်လန့်စေပြီးအမျိုးသမီးများနှင့်ကင်းကွာသည်ဟုခံစားရစေပြီး noFap က၎င်းကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလုပ်ဆောင်မှုသို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
5 လကျော် Porn မပါ။ ပြီးခဲ့သည့်ညနှင့်ယနေ့နံနက် - ကွန်ဒုံးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပါ။
ငါသာယခုငါမှာအားလုံး fapping မပါဘဲသွားဖို့ကြိုးစားနေငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အတန်ပြန် reset ။ ဒါကြောင့်ပဲ porn forgoing ခံခဲ့ရခြင်းမပြုမီ။
Make အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင် !!!!
အဆိုပါပြန်ပြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်သောပြန်လည်စတင်မှုပြီးဆုံးချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ကြိမ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ငါ PIED ကိုပြန်မသွားချင်လို့ပါ။ သို့သော်စွဲခိုင်မာသည်။ ငါအရင်ကပြောခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုစွဲသည်။ သင်၏ဒစ်ပြန်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ဒစ်အလုပ်မလုပ်သည့်တိုင်၎င်းသည် ၁၀၀ ရာနှုန်းသို့မဟုတ်ဂိမ်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ဆေးကုရန်အချိန်နှင့်ဆေးစွဲရန်အတွက်အချိန်ယူရသည်။
ငါထင်တာကရာသက်ပန်ဖြစ်မယ်၊ မနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်မယ်။ အရက်သောက်ခြင်းကိုပြန်မသွားနိုင်ပါ တစ်ချိန်ကနှစ်ခါပြန်ဖြစ်တာကောင်းပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု၊ GF နှင့်အခြားအရာများနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းသည်ပြန်လည်သက်ရောက်နိုင်သည်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်း
sh ** t လိုကြာချိန် ၄ လကျော်နေပြီး၊ ငါ့မှာ MO ၇ ရက်ရှိပြီ။ အဲလိုခိုင်ခံ့တဲ့စိုက်ထူမှုတစ်ခုကိုငါမမှတ်မိဘူး၊ မင်းရဲ့စိုက်ထူမှုဟာ“ သော့ခတ်” တဲ့အခါကောင်းတဲ့ခံစားမှုပါ။ ငါသည်လည်းထိုကဲ့သို့သောခိုင်ခံ့နံနက်သစ်သားရှိသည်ဘူး။ ငါ့အားနည်းသောစိုက်ထူမှုများအတွက် porn ကိုသံသယမဖြစ်မိအောင်ကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်တော့သည်ကိုမယုံနိုင်ဘူး။ : :)
rebooting လုပ်ခြင်းဖြင့် Great ကြီးတယ်။
ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပိုမိုပြောပြသွားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ပထမအင်္ဂလိပ်စကားပြောမကောင်းပါ၊ ငါကပြင်သစ်ပါ၊ ထောက်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ့် 23 နှစ်အရွယ်မှာတိုင်အောင်, ကိုယ့်ဒါပုံမှန်အားဖြင့်, ညစ်ညမ်းရုံအကြိမ်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်။ ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံး gf နှင့်အတူရှိ၏, သူငါ့ကို blowjob ကိုပေး၏သောအခါ, အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူကောင်းသောခဲ့ကြသည်။
_ 25 မှာ, ကိုယ့်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ porn စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအဈ porn စိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ အချိန်ကိုအတူ, porn ဘဝမှာပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ထိုအဈအချို့သောရောဂါရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ မဟုတ် blowjob နှင့်သူမ၏ပွတ်နယ်, ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ထိုးဖောက်ရန်။ နှင့်အကြိမ်အနည်းငယ်ပင်သူမ၏ rubb ဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အစိတျထဲမှာမပါပြဿနာ။
_G 27 ငါအခြား GF တစ်ခုပြောင်းသောအခါငါအဝတ်မချွတ်သောအခါသူမ pussy ကိုဒစ်နှင့်ပွတ်သပ်ရန်မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါသူမနောက်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူး၊ ဒီတော့ငါ့အတွက်ပြnoနာမရှိဘူး
_At 28 ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ လှပသောမိန်းကလေး။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုနေ့တိုင်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကြီး masturbated နှင့်ဈအလွန်မကြာခဏ porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အကြှနျုပျနှငျ့အသူမ၏တစ်အိပ်ရာထဲတွင်လက်သီးအချိန်များအတွက်သောအခါဒီတော့ကိုယ့်အစအဦး (နမ်းရှုပ် cuddling) တွင်တစ်ခုစိုက်ထူခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့မှာအဘယ်အရာကိုမျှအချည်းစည်းရှိကြ၏အခါ။
တောင်မှတစ် blowjob မျှစိုက်ထူအတူ။
ငါနားလည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါပြင်သစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို porn အကြောင်းရှာခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် YBOP နဲ့ YBR လိုမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့ဟာ porn နဲ့ masturbation ကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့် dopamine နဲ့မပတ်သက်ဘူး၊
အချိန် (9 လအတွင်း) နဲ့ကိုယ့်ကျရှုံးနှင့်အချို့သောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူသူမ၏ထိုးဖောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့နှင့် PE ။ ဒါကြောင့်လျော့နည်း porn (အနည်းငယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့), လျော့နည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (့သုတ်ရည်လွှတ်စစ်ဆေးရန်ကြိုးစားရန်), နှင့် (အစအဦးမှာအချို့ဆေးပြားနှင့်အတူ) သူမ၏နှင့်အတူ orgasm ။ တကယ့် reboot မဟုတ်ဒါကြောင့်။
ဒါပေမယ့် ၉ လကြာအလင်းပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာခင်ဗျားကမင်းကိုယုံလို့ရပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမ PIED မရှိ PE, ဒါပေမယ့် Hard Rock ကိုစိုက်ထူ! တစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာခက်ခဲသောသစ်သားတစ်မျိုးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါသူမကိုအိပ်ရာထဲကအလွန်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည် (၄၅ မိနစ်အထိ)
ငါမျှဝေဖို့ရှိသည်, အခုအချိန်မှာငါပျော်ရွှင်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်နိုးထမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တကယ့်ပြသနာများကိုယနေ့တိုင်အောင်တွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။ ရုတ်တရက်ဘယ်နေရာမှာမှငါပဲကြီးမားတဲ့ boner spik နှင့်ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိပင်မပါဘဲကိုယ့်နီးပါးသုတ်ရည်လွှတ်အစက်အပြောက်ပေါ်မှာအရမ်း horny တယ်။ ခံစားချက်ကအရမ်းပြင်းထန်လွန်းလို့ကျွန်မလက်ကိုကိုက်လိုက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းနိုင်အောင်မျက်စိကိုပိတ်လိုက်ရတယ်။ ငါ့ ED ပျောက်ကွယ်သွားပြီထင်တယ် ဘုရားရေ! ငါမယုံနိုင်! ကျွန်တော်ခံစားဖူးသမျှအကောင်းဆုံးခံစားချက်ပါ။ အလွန်ပြင်းထန်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှု! ဒီ shit တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်!
ကျွန်ုပ်အသက် ၁၅ နှစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုသန့်စင်ရန်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ ဒါကငါ့ရဲ့စတုတ္ထပတ်နဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာဇယားတွေတက်လာပြီးကျွန်တော့်နံနက်တောအုပ်ကအိပ်နေပေမယ့်လည်းအားကောင်းနေတယ်။ ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပြီးငါဒီမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စိတ်မကောင်းပါဘူးကောင်လေးတွေ၊ ဒီ post ဟာငါကဲ့သို့သောအရေးပေါ်ထိတ်လန့်စရာ post ကိုအစောပိုင်းကပဲသင်ကိုယ်တိုင်ယောက်ျားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ချင်ခဲ့တယ်။ ငါ (၁၉) နှစ်တာကာလအတွင်း Porn စွဲကပ်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မတော်တဆအသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေစဉ်တကယ့်ကိုထိမိလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကကျွန်တော့် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာမထုတ်ခဲ့ဘူး၊ ငါဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုပဲအမြဲတမ်းသိနေတယ်၊ ​​ငါဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမသိဘူး။
အတော်လေး / ကန့်သတ်အကြိမ်အနည်းငယ်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုတကယ်တစ်ဦး Streak ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ခဲ့တာဘယ်တော့မှကိုယ်ကဒီမှာသို့မဟုတ်အဲဒီမှာတစ်လ go, ပြီးတော့မူးရူးလိမ့်မယ်။ ထိုအခါဈဤကွီးစှာသောမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်ဈဈဂုဏ်နဒီရိုက်နှက်တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါ 68 ရက်ပေါင်း သွား. ဈဈအစဉ်အဆက်ရှိသည်အကောင်းဆုံး, ကြောက်မက်ဘွယ်ခံစားခဲ့ရငါ့အ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ !!
ဒါပေမယ့်အခုတော့ငါတော်တော်လေးကြောက်လန့်နေပြီ၊ ၆၈ ရက်ကြာတဲ့လမ်းမဟာငါကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံနေတယ်။ ပြီးတော့ငါအရက်မူးပြီးပြန်ပေါ်လာတယ်။ ED နဲ့ငါပြန်လာပြီလို့ငါထင်တယ်။ ဒီတော့ yeah ငါစူပါ shit ကဲ့သို့ခံစားရတယ်နှင့်ငါတကယ်စိတ်ပျက်မိပါတယ်အဖြစ်ငါဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုသင့်ရဲ့အကူအညီတောင်းခံလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။
porn ED နှင့်ဆက်စပ်သော
အဆိုပါ (လျှို့ဝှက်) porn ချစ်သူများသည်။ သိပ်ညစ်ညမ်းကောင်းတစ်ဦးအရာဘယ်တော့မှမဖြစ် မရှိအလေးအနက်ထား ။ Profectus ကအကြောင်းအရာတွေဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီ post ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်။ 2007 ခုနှစ်တွင်ငါအလားတူပေမယ့်ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများမကြုံတွေ့။ အောက်ခြေလိုင်း, ဗီဒီယိုများမှထွက်လူရှုပ်ခြင်းအစစ်အမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ / တွေ့ဆုံရန်လှုံ့ဆော်အဆက်မပြတ်ယိုယွင်းပျက်စီးစေသည်။
Prodigy, buddy ဘာလဲ
မင်းတင်ထားတာကိုကျွန်တော်မဖတ်ရသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိစေချင်တယ် ကျွန်တော့်အတွက်အဖြေကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးဝကြည့်ရှုခြင်းမှတားဆီးရန်မဟုတ်ဘဲရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံရစဉ် (စသည်တို့ကိုကုန်တိုက်ကြီး၊ လမ်းပေါ်၌ပင်စသည်ဖြင့်) ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောတကယ့်သက်ရှိအမျိုးသမီးများကိုသာစိတ်ကူးဖြင့်ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ပဲငါ့ကို; ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စများ, etc ။
စိတ်ဝင်စားစရာငါနီးပါးသောဝဒေနာအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့ ecstasy ၏ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ဖို့အမြိုးသမီးတစိတ်ကူးယဉ်နေချိန်မှာငါချွတ်ရိုက်နှက်လျှင်, ငါနှစ်ကြိမ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးကြိမ်အော်ဂဇင်နိုင်။ တှေ့ရှိ
အခုဆိုရင်သာအနည်းငယ်ရှားပါး porn မြင်ကွင်းများတကယ်ပဲငါ့ကိုမနှိုးဆှ, ဒါပေမဲ့သူတို့ယခုငါမပြုမီကြိုက်နှစ်သက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယထက်လမ်းကိုပိုပြီးငါ့ကိုနှိုးဆှ။
ငါနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ် - လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တူညီတဲ့ပြproblemsနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ မင်းလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုပုံမှန်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ porn ကသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအသုံးပြု။ ရန်ရပ်တန့်ပုံပါဘဲ
ငါရိုးရိုးသားသားပြောရရင်စိုက်ထူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြmuchနာအများကြီးမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသတိထားမိတာကဒီအမျိုးသမီးနဲ့ ၈ လကျော်နေခဲ့တာပါပဲ။ ငါပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကြုံခဲ့ရပြီးစိတ်ဝင်စားမှုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့အတူတကွတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါနှင့်အတူကစားရန်အစစ်အမှန်အရာတယ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းအတွက် ... ငါသော်လည်းလုံးဝအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး ... ဒါပေမယ့်ငါလကိုတိုးတက်သည်နှင့်အမျှငါ့စိုက်ထူအမျိုးသမီးနှင့်အတူပိုမိုခက်ခဲနှင့်ပို။ ရတယ် ... ကန ဦး ငါ့ကိုအံ့သြသွားတယ် ... ကရတယ်တစ် သူမသည်ကျောက်တုံးကဲ့သို့ခံစားနေရသည်ဟုသူမကိုယ်တိုင်မှတ်ချက်ပေးမည့်အရာ…ကိစ္စ၏အစတွင်မလုံလောက်သေးပါ။ မည်သည့်မိန်းကလေးမဆိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုထက်ပိုပါသည်။ ငါ porn မပါဘဲသွားလေပိုပြောရရင်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ...
ဒါကငါ့ကိုတကယ့်တွန်းအားပေးတာပါပဲ .. ဒါကြောင့်ငါစိုက်ထူခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေလို့အကြောင်းပြချက်ကကျွန်ုပ်ဟာမထိမခံရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါကမီးသီးကငါ့ခေါင်းပေါ်မှာစဲလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်မိလို့ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်မှသာလျှင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျွန်တော့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အထိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုပြန်လာဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ငါငပဲနဲ့ခေါင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမစဉ်းစားတော့ဘူး။ reboot ကသင့်ကိုစွမ်းအားပေးတဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကသင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုကိုအမှန်တကယ်နားလည်စေသည်။ သင်ဟာပိုပြီးထိုက်တန်သည်။ သင်ဟာဘုရင်ဖြစ်သည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသင့်ကို ၀ ယ်လို့မရပါဘူး။ သင်ဟာစျေးသိပ်မကြီးပါဘူး။
ဟေ့ကောင်တွေ၊ ဒါဆိုငါဘာကြောင့် fap မပါတာလဲဆိုတာကိုမင်းကိုပြောပြပါရစေ။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၀ ကျွန်ုပ်သည်နီပေါနိုင်ငံမှ ၈ တန်းမှအမေရိကသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဲဒီတုန်းကငါ ၁၃ နှစ်ရှိပြီ။ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာများအတွက် porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါ sexy ဂီတဗီဒီယိုများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ချွတ် jerked ။ ပြီးတော့ငါ porn ကြည့်နေတယ်။ အဲဒါကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကနေစပြီးနောက်ဆုံးမှာလိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ ငါနေ့တိုင်းတကြိမ်ချွတ်လူရှုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကပြaနာမရှိဘူး၊ အသက် ၁၇ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြnoနာမရှိခဲ့ဘူး။ ငါကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ခဲ့တာတောင်မှသူ့ကိုထပြီးသဲထဲရေသွန်လိုက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တုန်းကငါရည်းစားရည်းစားလည်းရှိခဲ့ဖူးတယ်။ သူမအခန်းထဲသို့ဝင်တိုင်းအချိန်တိုင်းခဲယဉ်းလိမ့်မည်။
ငါနှင့်ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ကျွန်တော်တို့ဟာအရက်မူးသောအခါလိင်ရှိသည်ဖို့အနှိပ်ခန်းမှသှားသောအခါပြဿနာ arised ။ ငါအနှိပ်အဘို့ကောက်ယူသောမိန်းကလေးစူပါပူကြီးနှင့်သူမအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအခါငါခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့သူမ၏အထဲမှာထည့်သောအခါပေမယ့်, ငါ့လိင်တံပျော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အသက်အဘို့ခက်ခဲမရနိုင်ဘူး။ ဒါဟာရှက်စရာကြီးနဲ့ကျွန်မအိမ်ပြန်ရောက်တော့ထိုနောက်ငါဖွစျခဲ့ပွီးအဘယ်အရာကိုသုတေသနပြုပြီးတော့ငါသညျဤ reddit အပေါ်သို့လဲ။
ငါ 20 ရက်အကြာမျှကွာဟမှုစတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်ငါ့အဘို့ကြောင်းခက်ခဲခဲ့သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်ယနေ့ငါလိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲမတိုင်မီပြုပါဘယ်တော့မှနိုင်သောငါ၏လိင်တံကိုထိရုံ, ငါ့လက်ဖြင့်ခက်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုးစားသင့်စဉ်းစားမိတယ်။ ငါ၏အအံ့အားသင့်ဖို့, ငါ့လိင်တံငါကနှစ်ခုကြိမ်လိုက်ပါတယ်သောအခါအခက်ခဲကျောက်တယ်။ ငါဒါပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်အခြားလူဦး pied ကနေဆင်းရဲခံရလျှင်အဘယ်သူမျှမ FAP အချိန်တိုတောင်းသောငွေပမာဏကိုအတွက် 100% အလုပ်လုပ်ရန်မမွငျနိုငျသောကြောင့်ငါသည်ဤဝေမျှမယ်လို့ထင်ကြတယ်။
ပြင်းထန် Pied တိုးတက်ရေးပါတီ
ငါအသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက ED လို့ငါထင်တယ်။ မအောင်မြင်သောကြိုးစားမှုများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဇူလိုင်လကတည်းက porn ကိုမကြည့်ခဲ့ပါ။ ယခုလတွင် MO ကိုနှစ်ကြိမ်လုပ်သည်။ မနေ့ကငါအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါ 24% စိုက်ထူမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်။ ငါကအချိန်ကအရမ်းနီးစပ်နှင့် 100% ဝန်းကျင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကဆုံးရှုံးဖို့စိတ်မပူခဲ့ပါဘူးနှင့်လိင်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ငါအရမ်းအရမ်းမူးနေတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့သောတိုးတက်မှုသည်လက်တွေ့မကျပါ။ ယခုစက်တင်ဘာလမှတဆင့်သွားစောင့်ရှောက်ရမည်။ ဤအရာသည် reboot လုပ်စဉ်အတွင်း MO ကိုပြနိုင်သည် (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်) ။
ရုံ 50 ရက်အမှတ်အသားလွန်! ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံမှာ (၃၁ နှစ်၊ ~ ၁၉ နှစ်ရှိ PIED အသုံးပြုသူ)
မင်္ဂလာပါလူတိုင်း, ငါပဲ 50 နေ့ကအမှတ်အသားလွန်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားကာလ၌ငါ၏အပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝလပြီးစီးခဲ့ပြောဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငါသည်တနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ပေါ်နှင့် nofap ၏ချွတ်ခဲ့ပြီးလအနည်းငယ်ပြန် pornfree ရှာဖွေတွေ့ရှိဒီမှာရပ်ရွာကယ့်ကိုကြီးမြတ်ဖြစ်တယ်, ဒါသင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ကြပါပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မအနာဂတျအတှကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အခြားသူများအချို့သောရှုထောင့်ပေးရန်ဒီနေရာကိုနှစ်ဦးစလုံးရတယ်ဘယ်လိုအဖုံးကိုချင်တယ်။
သတိပေးချက်။ ငါ“ ဆက်ဆံရေး” ၏အတော်လေးယဉ်သောဖော်ပြချက်များအထူးသဖြင့် PIED အကြောင်းဆွေးနွေးသည့်အခါ၌အသုံးပြုသည်။
31 နှစ်ရှိပြီ, အထီး
အသက်အရွယ် 12 န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေ Started ပြီးတော့ 14 အပေါ်အကြောင်းကိုထံမှတသမတ်တည်း MO ကိုအတွက် add
17 (ယေဘုယျအင်တာနက်စွဲလမ်းသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်ခြင်းသံသရာမှာလည်းပြဿနာ) ဝန်းကျင်ဝယ်ယူမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်
(~ 1 / နေ့ကိုအနည်းငယ်လျော့နည်းဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသော) မှန်မှန် porn အသုံးပြုခြင်း
တစ်နှစ်ကျော်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းများအတွက်လူပျို, ~3လအတွင်းအဘို့ကြီးစွာသောမိန်းကလေးနေ့စွဲဖြည့်ဆည်း။ ဒါဟာကြင်နာထဲကမှေးမှိန်, ဒါပေမယ့်ငါ PIED နဲ့ငါ့ပထမဦးဆုံး (ယခု) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိစ္စများရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုယ်အလေးချိန်အနည်းငယ်ရရှိခဲ့ဖူးသောကွောငျ့အကြှနျုပျသအချိန်တွင်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမရှိခြင်းအပေါ်အပြစ်တင်ပေမယ့်ငါပေါ်မှာငါတို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်ပြဿနာများကိုခဲ့နှင့်မဆိုဆွဲဆောင်ပြဿနာကိုလည်းညစ်ညမ်း၏ရလဒ်သကဲ့သို့ငါ၏စံပြအမျိုးသမီးတစ်ဦးပုံရိပ်မှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ခဲ့သည်
(ငါ၏အတပြင်လုံးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝကိုလာနှင့်သွားပြီဖြစ်သော) ရှည်လျားသောအလုပ်လက်မဲ့နှင့်ထပ်တလဲလဲစိတ်ကျရောဂါနဲ့ပေါင်းစပ်မှစိတ်ဓာတ်ငါအတိတ် 4ish နှစ်ပေါင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသွားလေ၏
တစ်ကိုယ်ရေနေဖို့လိုတယ်၊ ပြီးတော့ငါအတူတူစုဝေးတဲ့အထိရိုးရှင်းပါတယ်၊ အဲဒီနောက်ငါမလုပ်မချင်းဘယ်သူ့ကိုမှအကျိုးမရှိဘူး၊ အဲဒီတော့ငါကအမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုလက်ခံဖို့တုန်လှုပ်သောငြိမ်းချမ်းရေးရှိခဲ့သည်။ ငါလည်းတညတာရပ်တည်ချက်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါဒီတစ်ခေါက်လုံးလိင်မဆက်ဆံဘူး။
အကြောင်းကို3နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်သာအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ PMO အလုပ်လုပ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တွင်အလွန်နီးကပ်သောမိတ်ဆွေများနှင့်အထောက်အကူပြုမိသားစု ရှိ၍ ကျွန်ုပ်အားဤအရာအလုံးစုံရာသီဥတုကိုကူညီပေးခဲ့သော်လည်းဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူမျှဝေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
မြင့်မားတဲ့အဆုံး VR စနစ်အားဝယ်ယူခြင်းနှင့် VR porn ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုမှာလွခဲ့သည်။ ကြင်နာငါ့ကိုကြောက်လန်ဒါတကယ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး porn ဖြတ်ရှေ့မှာသုံးပြီးရပ်တန့်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်း၏ရှေးခယျြမှုနှင့်အတူ (နောက်တဖန်) အော့နှလုံးနာတွေ့ရှိခဲ့ပိုပိုပြီးငါ၏အညစ်ညမ်းစွဲကြီးဘယ်လောက်လေးနက်နီးပါးမျှအိပ်ပျော်ရာတညဉ့်အပြီးလက်ခံနှင့်အလုပ်သွားဖို့လိုအပ်နေ Started (ပိုပြီးအစွန်းရောက်အစဉ်အမြဲငါအတွက်စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်ထက်ကြီးကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယ စစ်မှန်သောဘဝ), နှင့်အထွေထွေ၌ငါ့ဘဝ။
ငါအဓိကအား porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်ပြန်လည်နာလန်ထူမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်သွေးဆောင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးမှာအဖြစ်ကောင်းစွာ MO ကိုရှောင်ရှားမည်ဟုမကြာသေးခင်ကကြိုးစားမှုအဖြစ်အတူတူပင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ပတ်ခွဲခန့် PMO အခမဲ့ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိန်းကလေး (ယခု gf) နှင့်တွေ့သည်။ ငါကတစ်ကိုယ်ရေသမားဖြစ်လို့အစပိုင်းတွင်သူမကိုအလွန်အကံျွချင့်တွက်မိသည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမမှာတကယ့်သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။
ညာဖက်လင်းနို့ကိုချွတ်, ဒီငါ့ကိုဤအချိန်ရေတွက်စေရန်အဘို့အကြီးမားတဲ့စေ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းအမှန်တကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်သူမ၏နဲ့ငါ့နှောင်ကြိုးကိုခိုင်ခံ့စေ၏တိုးတက်အောင်အပေါ်ပိုပြီးငါ့ကိုအာရုံစူးစိုက်ကူညီပေးခဲ့သည်သောငါ၏အသက်တာ၌တစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက်သက်ဆိုင်တဲ့အဓိကအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းကျွန်ုပ်သတိပြုမိသောအရာများ
ငါသေချာပေါက်အရာများကိုပိုမိုအပြုသဘောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာကြည့်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင် pornfree ထက်ဆက်ဆံရေးကြောင့်ကြောင့်
အဘယ်သူမျှမစူပါပါဝါ (သေး) ။ မည်သည့်မျှော်လင့်ချက်မှမမျှော်လင့်ပါ၊ သို့သော် nofap ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့တိုင်အယူအဆကိုတကယ်နားမလည်ကြဘူး
ပထမရက်သတ္တပတ်နှင့်တစ်ဝက်ကိုဖြတ်ပြီးယခင်အစအနများကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးကိုတစ်ပတ်အတွင်းအမြန်ပြန်ကောင်းလာမည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်နောက်ကျကျန်ရစ်သော်လည်းဤအချိန်သည်ရုတ်တရက်ဆက်ဆံရေးများတိုးပွားလာခဲ့သည်။
ငါ့အသက်ကို၏အခြားရှုထောင့်မျှတစွာပုံမှန်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တဦးတည်းဧရိယာထဲမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်အောင်တသမတ်တည်းငါ့ကိုတိုးတက်မှုလိုအပျကွောငျးအခွားသူမြားကိုအနည်းငယ်ပိုကြိုးစားပြီးကူညီပေးသည်ဘယ်မှာနှေး, ကြီးထွားလာတိုးတက်မှုသတိထားမိနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာ gf ရှိပြီးအခြားအရာအားလုံးကိုဂရုတစိုက်ရှောင်ရှားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ PIED သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အချိန်မည်မျှကြာမည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမသိခဲ့ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ ငါကြိုးစားခဲ့တာကိုငါကြောက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်ရက်ရောရောလုပ်ခဲ့တယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ငါတို့နှစ် ဦး လုံးသည်တစ်နေ့တာလုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေခဲ့ကြရပြီးအတော်လေးခက်ခဲသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုလမ်းအတိုင်းမနေခဲ့ပါ၊ တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်သူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုပါးစပ်ဖြင့်စကားပြောရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ မရပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ငါအဲဒီအချိန်ဘယ်မှာရှိလဲ (~ ၄၀ PMO မပါ) နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရှင်းပြခဲ့ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမတိုင်မီရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာပင်ကြာမြင့်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သူမနှင့်ဘာမှမပတ်သက်ပါ။ သူမသည်အမှန်တကယ်နားလည်သောကြောင့်အရာရာတိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုရှိရန် ပို၍ နီးကပ်စေသည်။ ငါ / ငါတို့ယခုအချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်လျှင်ငါတို့ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်, ဒါပေမယ့်မကြာမီအချိန်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မှား နောက် ၄ ရက်အကြာမှာငါတို့ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရှိသေးတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလိုမျိုးအပြည့်အဝမတတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မဂရုစိုက်တဲ့သူနဲ့သာမန်ဖြစ်ခြင်း၊
ငါနေဆဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာကြာပိုမှာအနည်းဆုံးလအနည်းငယ်အားလုံးကို MO ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအပေါ်စီစဉ်ထားသည်။
သငျသညျရိုးရှင်းစွာ porn မသုံးနိုင်သည်ကိုလက်ခံပါ။ ငါထင်တာကဒီဟာကအရေးအကြီးဆုံးပဲ။ ကြိုတင်ကြိုးစားမှုများသည်“ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါပဲရပ်လိုက်မယ်” ဟူသောစိတ်ဓာတ်အပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်ငါဘယ်တော့မျှနက်ရှိုင်းစွာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဟာနှစ်အနည်းငယ်တောင်မှအဆင်ပြေအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတာတောင်မှအသိအမှတ်ပြုဖို့အမှတ်ရလိုက်တယ်။ ဘယ်တော့မှနောက်တဖန်မ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏အမှားဟောင်းများကိုဖျက်ပစ်ရန်အမှန်တကယ်ပင်နှောင့်နှေးခဲ့သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်များကသူတို့ကိုအသုံးမပြုခဲ့သော်လည်းဟောင်းနွမ်းသော hard drive များပေါ်တွင်ထိုင်နေခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏ကတိကဝတ်ပြုခြင်း၏အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါဟာပိုပြီးလေးနက်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်လည်စတင်ဖို့မရည်ရွယ်ဘဲနုတ်ထွက်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုတကယ်စဉ်းစားခဲ့တယ်။
ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ Startနှင့်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးပါ။ ငါကြောင့်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ခံစားခဲ့ရပုံကိုရွံရှာမှတ်မိဖို့ကအချက်တို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှေ့မှာလမ်းခံစားခဲ့ရဖူးသော်လည်းငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်းသို့မီးရှို့ခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါကစဉ်းစားပါ။ ဒါဟာနေဆဲနောက်ကျောရှိသွားကြဖို့လိုမှငါ့ကိုကူညီပေးသည်ရာ, ငါ့ကိုမကောင်းတဲ့ခံစားရစေသည်။
အဘယ်သူမျှမချောင်းကြည့်ပါ။ ဒီတစ်ခုကငါ့အတွက်ကြီးမားတယ် အရင်ကကျွန်တော့်ရဲ့အစွန်းတွေအားလုံးနီးပါးကို "စပ်စု" လာပြီး softcore (တင်းကျပ်စွာဘောင်းဘီစတာတွေ) တောင်မှတစ်ခုခုကို googling ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံအနည်းငယ်ကိုကြည့်ပြီးနောက်၎င်းသည်ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါထိုအရပ်မှမြင့်တက် အစဉ်မပြတ်ငါကသတိပြုမိခဲ့သည် ဤအချိန်ငါမလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျူးလွန်။
မိုက်မဲစံချိန်စံညွှန်းများ။ peeking ကိုတားဆီးဖို့ငါအဲဒီမှာငါ့ကို ဦး ဆောင်သောအရာတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက်မရှိသောအင်တာနက်ရှာဖွေခြင်း (ပြaနာတစ်ခုရှိသော်လည်းပိုကောင်းသည်) ကိုလျှော့ချရန်လိုသည်။ သို့သော်မိုက်မဲသော်လည်းထိရောက်သောအချို့လည်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်၊ ပြပွဲများနှင့် youtube ဗီဒီယိုများတွင်လိင်စိတ်နည်းသည့် (အချို့သောယောဂကျင့်နေသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ပင်လျှင်) ပင်ကြည့်ရှုခြင်းစတင်သည်။ အလားတူရုပ်ပုံများကိုအပြစ်မရှိသောဆိုဒ်များနှင့်မဂ္ဂဇင်းများပေါ်တွင် နှိပ်၍ ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ငါအနည်းငယ်ဖြေလျော့လိုက်ပြီးငါ gf နဲ့အတူငါစိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းအလေးအနက်ထားတယ်။
ကွန်ပျူတာကိုရှောင်ပါ။ ကွန်ပျူတာကိုတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ (အလုပ်၊ ကျောင်း၊ ဂိမ်း၊ စသည်ဖြင့်) ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးထိုရည်ရွယ်ချက်ပြီးသည်နှင့်ပိတ်ပါ။ netflix အချိန်တိုးများလာပေမယ့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျ PIED ရှိသည်နှင့်သင်စိတ်ဝင်စားတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သောကံကောင်းမှန်လျှင်, ရိုးသားပါ! ငါထင်သည်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအလုံအလောက်အလေးပေးလို့မရပါဘူး။ ငါ၏အပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်အဓိကခုန်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အားကျွန်ုပ်၏ယခင်ဆက်ဆံရေး၌ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ကိုမကျေနပ်မှုကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်စေမည့်အစား၊ ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေသည်အပြုသဘောဖြစ်လာသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့အဲဒါဟာကျွန်တော့်ကိုဖိအားအများကြီးပေးခဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲအာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဖတ်ပြီးသောအရာကိုမှပုံလုံးဝစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ တိုးမြှင့်မှုများပြုလုပ်ခြင်းသည်အချို့အတွက်ယာယီအထောက်အကူပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သော်လည်းမှီခိုအားထားသင့်သည်။ တစ်ခုတည်းသောကုသနည်းမှာသင်၏ ဦး နှောက်ကိုအချိန်နှင့်ရှင်းလင်းပြီးပြoverနာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စိုးရိမ်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ငါ (ငါတကယ်ကံကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ်) ငါလိုငါထက်ပိုပြီးအချိန်အများကြီးယူရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်အမြဲတမ်းနေချင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်လူတိုင်းရဲ့အကျိုးအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါ။ မင်းအဲဒီကိုရောက်မယ်
TL; DR: ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုနီးပါးရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက် PIED ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ့အစွဲဆေးလိပ်ဖြတ်အကြောင်းကိုအလေးအနက်တယ်။ ငါသွားရမယ့်လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီအချိန်ဟာငါ့အချိန်ပဲဆိုတာသတိထားမိတယ်။